Mpikambana:Bot-Jagwar/tenin'ny gazety/2 Febroary 2013 - Wikibolana, raki-bolana malalaka
Mpikambana:Bot-Jagwar/tenin'ny gazety/2 Febroary 2013
Jayanth (nitranga in-1) : Nanoratra ny fisantarana andraikitra tao amin'ny bilaogy ofisialin'ny Google Maps i Jayanth Mysore, mpitarika ny tetikasa Taon-tsarintany Google. (Google Mamoaka Ny Sarintanin'i Korea Avaratra Hifandrimbonana)
Manakara (nitranga in-1) : Tany amin'ny 350km atsinanan'i Manakara no nisy ny foibeny, omaly hariva. (Rivo-doza felleng – Olona efatra indray no tsy hita popoka)
rihary (nitranga in-1) : nipoitra ihany koa ireo mpomba an'i Jean Omer Beriziky, taorian'ilay Filan-kevitry ny minisitra niteraka resabe ary nampiseho niha- rihary indray ny tsy fitovi-an-kevitra eo amin'ny Filohan'ny tetezamita sy ny Praiminisitra amin'izay mahakasika ny fandinihana ireo volavolan-dalàna momba ny raharaham-pifidianana. (Disadisa amin-dRajoelina – Niaro an’i Beriziky Rakotovahiny sy i Voninahitsy)
savethechildrenuk (nitranga in-1) : Ity lahatsary manaraka ity, Ao anatin'ny Hatsiaka: miaritra ny ririnina ireo fianakaviana mpitsoa-ponenana Syriana, lahatsary navoakan'ny savethechildrenuk mba hampisehoana ny filàn'ny ankizy sy ny fanangonam-bola ho an'ireo ankizy mpitsoa-ponenana:
Tsy manantsiny lasibatr'ity ady ity ny ankizy Syriana ka tairina ny saina amin'ny manjò azy ireo ary ezahina ny hanamaivanana ny fijalian'izy ireo ho an'izay rehetra afaka manao izany. (Krizin'ny Ankizy Ao Syria: Ahoana Ny Fomba Hanampianao)
tatitry (nitranga in-1) : Navoakan'ny tatitry ny Birao nasionaly misahana ny fitantanana ny loza voajanahary (Bngrc) omaly, fa olona efatra indray no tsy hita popoka, iray tany Mananara Avaratra, iray tany Midongy Atsimo, roa tany Mampikony. (Rivo-doza felleng – Olona efatra indray no tsy hita popoka)
filazalazana (nitranga in-1) : (Raha hijery ny dika Koreana, tsindrio eto)
Tsy mitsahatra ny miasa manampy antsipirihany kokoa momba ny sarintany amin'ny faritra banga filazalazana izahay. (Google Mamoaka Ny Sarintanin'i Korea Avaratra Hifandrimbonana)
marainan' (nitranga in-1) : namboraka tamin'ny mpanao famotorana ny zava-nitranga teny Ambatoroka, ny marainan'ny 16 janoary ireo efa-dahy voalaza fa nanafika ny mpitandrina Rasendrahasina Lala. (Betroka – Latsa-nenina ireo voatondro ho nanafika ny pasitera Rasendrahasina)
Schmidt (nitranga in-1) : Tamin'ny 29 Jan 2013 no namoahan'i Google ny sarintanin'i Korea Avaratra nifandrimbonana, telo herinandro monja nitsidihan'ny tale jeneralin'ny Google, Eric Schmidt, tao amin'ny firenena. (Google Mamoaka Ny Sarintanin'i Korea Avaratra Hifandrimbonana)
children (nitranga in-2) : Ao amin'ny Facebook: Save Syrian children
Facebook: SRC mpitsoa-ponenana Syriana ao Libanona [ar] (تنسيقية اللاجئين السوريين في لبنان) Apariaho ny hetsika, mandraisa anjara ao amin'ny Global walk 4 children of Syria Tohano ny kamboty anio amin'ny vola $50 ao amin'ny Kamboty Syriana Change. (Krizin'ny Ankizy Ao Syria: Ahoana Ny Fomba Hanampianao)
Tsaralalàna (nitranga in-1) : nitondra hevitra maro ho an'izay ho mpitondra rahampitso i Harotsilavo Rakotoson, mpahay lalàna nandritra ny famelabelaran-kevitra nataony teny amin'ny sekolim-pirenena manofana ho mpitsara sy mpiraki-draharaha eny Tsaralalàna, omaly. (Krizy miverimberina – Niadian-kevitra teny Tsara-lalàna ny fototry ny olana)
Togo (nitranga in-1) : nIVOAKA ALINA
Taorian'ny nahatafita an' i Togo voalohany teo amin'ny ampahefa-dalana ho an'ny Can 2013 dia nanao lanonana tany amina trano fandihizana iray tao Riverside ry Adebayor sy ny namany nankalaza izany fandresena izany. (Anjoron- »CAN »)
Ramambason (nitranga in-1) : Isan'ireny Ramambason Andrialaza, raim-pianakaviana nandalina ny tontolon'ny elektroteknika nandritra ny efa-taona. (Fitsitsiana angovo – Efa misy mampiofana ny fampandehanana ny fiara amin’ny rano)
sena (nitranga in-1) : tsy hanao an-kambo ny Cnaps Sport (manga)
Samy nahavita fandre- sena roa avy, saingy miavaka eo amin'ny elanelan'ny baolina tafiditra sy niditra tao amin'ny tena ny AS Adema raha miohatra amin'ny Cnaps Sport. (Kitra « Grand tournoi de Tana » – Hiady Ar 2 tapitrisa ny AS Adema sy Cnaps Sport)
anovozany (nitranga in-1) : Toerana iseraseran'ny tanora sy anovozany fahalalana, manan-danja ho an'ny fampivelarana azy ireo ny tranon'ny tanora, anisan'ireo tetikasan' ny minisiteran'ny Tanora sy ny ala voly. (Tapatapany)
nahatafita (nitranga in-1) : nIVOAKA ALINA
karohinay (nitranga in-1) : Mbola misy iray miriaria karohinay amin'izao fotoana izao », hoy ireo polisy misahana ny heloka bevava izay manao ny famotorana. (Betroka – Latsa-nenina ireo voatondro ho nanafika ny pasitera Rasendrahasina)
Ankadindramamy (nitranga in-1) : Singanina manokana ilay loza mahatsiravina tetsy Ambohidahy Ankadindramamy tamin'ny taon-dasa; dia vao iny omaly iny saika nitera-doza goavana ihany koa ny tranga niseho teny Alasora. (Tsisy mihaino, mody tsy mahita)
Stef' (nitranga in-3) : fantatra izao fa tsy handray anjara amin'ny fifaninanana fiadiana izay ho tompon'ny amboaran' i Afrika ho an'ny ekipa tompondaka, ny Stef'Auto, izay tompondakan'i Mada- gasikara. (Volley ball Afrika – Tsy handray anjara amin’ ny fifaninanana ny Stef’Auto)
hydrôzena (nitranga in-3) : ramambason Andrialaza, mametaka ny fitaovana mamokatra hydrôzena hanampiana solika ampiasain'ity môtô ity
Ny voka-pikarohana nataon-dRakotomamonjy Salohy Fenosoa, mpianatra eo anivon'ny Lycée teknika etsy Alarobia, no nampahafantarana ny besinimaro ny 16 janoary teo, fa azo atao ny mampihena ny fandaniana solika amin'ny alalan'ny fampiasana ny hydrôzena, entona azo avy amin'ny fivakian-drianaratra na « électrolyse ». (Fitsitsiana angovo – Efa misy mampiofana ny fampandehanana ny fiara amin’ny rano)
mitsangatsangana (nitranga in-1) : afaka mitsangatsangana manerana ny tany ianao amin'ny alalan'ny klikin'ny totozy ao amin'ny Google Maps; mijery ny amparakatsakatsaka eto an-tany, eny fa na dia ny manavatsava an'i Antartika miaraka amin'ny andian-tsary afa-mihodidina aza. (Google Mamoaka Ny Sarintanin'i Korea Avaratra Hifandrimbonana)
fanaisorana (nitranga in-1) : Raha ny nambaran'ity tompon'andraikitra ity dia efa nanomboka afak'omaly ny fanaisorana ireo fako ireo. (Famatsiana rano – Telo andro nisotroana orana ny mponin’Antsiranana)
Rahetilahy (nitranga in-1) : Ny Vohitsera Production kosa no niantsoroka ny famokarana
Tany amin'ny taona 30 tany no namoahana voalohany ny «Nadika tamin'ny alina», izay nomarihin'ny talen' ny tranomboky, Rahetilahy Willy fa «boky tena mety ho an'ireo liana amin'ny fanadihadiana ny literatiora». (Literatiora – Nivoaka ny boky roa an- dRabearivelo nohavaozina)
Agronomieka (nitranga in-1) : Efa misy faritra nofefena toy izany ao amin' ny Agronomie,ka mpianatra ihany no afaka mandeha amin'izany”, hoy indray Rasoarahona Jean, talen' ny sampam-pianarana Agronomie. (Ankatso – Misy adala mampatahotra mirenireny)
hanaovana (nitranga in-2) : Ny fahefana miaramila indray dia tokony hampiasaina ho fiarovana ny vahoaka fa tsy sanatria hanaovana herim-pamoretana. (Valanaretina – Nametrahana toeram-pitsaboana eny akaikin’ ireo tra-boina)
manitsakitsaka (nitranga in-1) : Mety ho voampanga ho manitsakitsaka ny lalànan'ny fiarovam-pirenena ve aho noho ny fijereko io sarintany io fotsiny. (Google Mamoaka Ny Sarintanin'i Korea Avaratra Hifandrimbonana)
nohevery (nitranga in-1) : Hagagana ny an'ny olona rehetra teny amin'ny tribonaly Anosy, omaly, nahita ireo voafonja nentina tamin' ny fiara taksibe, zotra 128 mampitohy an'i Mahamasina sy Ankatso, raha fiara mano- kana no noheverin'ny rehetra fa fitondrana azy ireo hatramin'izay. (Fandriampahalemana – Entina amin’ny taksibe ireo voafonja hotsaraina)
Henry (nitranga in-2) : Tsy afaka manaisotra ireo fako ireo anefa izahay raha tsy mitsahatra ny orana », hoy Ravalisoa Henri, talen' ny famatsian-drano eo anivon'ny Jirama. (Fomba amam-panao – Hankalazaina ny 11 sy 12 marsa ny taom-baovao malagasy)
hevitry (nitranga in-1) : Andrasana amin'ity hetsika eny Andohalo ity ny fandraisan'anjaran' ireo sekoly amin'ny fanehoana ny hevitry ny fihavanana fahiny sy ankehitriny amin'ny alalan' ny sora-baventy. (Fomba amam-panao – Hankalazaina ny 11 sy 12 marsa ny taom-baovao malagasy)
DREAM (nitranga in-1) : Barphil Andriantsiferanarivo Fandaharan-dalao Sabotsy 2 febroary : 08H: BAD TEAM Alarobia # BFT Ivato (senior DAME) 09H30: BEMIRAY # DREAM TEAM (senior HOMME »A ») 11H: MADASPORT # BAD TEAM Alarobia (senior HOMME »B ») 13H00: TMB2A Ambohimirary # BCS Soamanandrariny (U20 Garcon) 14H00: BCS Soamanandrariny # JSM Ambohipo (senior HOMME »B ») Alahady 3 febroary: 08H: JBC Betongolo # AMBATOBE (senior HOMME »B ») 09H30: AMBATOBE # BAD TEAM Alarobia (senior HOMME »B ») 11H: CHALLENGER # TMB2A (U16.... (« Fety de baskety » – Hamaramparana ny fifanin- tsanana ny eny Andraisoro)
rotsak' (nitranga in-3) : tsy araka izay nahiana fa tsy dia nahitana rotsak'orana nanao ahoana loatra teto an-drenivohitra vokatr'ilay rivo-doza Felleng. (Rivo-doza felleng – Olona efatra indray no tsy hita popoka)
tafahoatra (nitranga in-2) : Ny mpamily sy ny tompon'ireo fiara mamoa-tsampona mantsy tsy ho tonga saina amin'ny loza mety hitranga, na misaina kely ihany saingy baikoin'ny fitiavam-bola diso tafahoatra. (Google Mamoaka Ny Sarintanin'i Korea Avaratra Hifandrimbonana)
zon' (nitranga in-1) : Amin'ny fandraisana anjara ataonao, afaka maneho ny fahangorahanao ianao ary afaka ny manamafy ny feonao mba handraisan'ny Firenena Mikambana ny andraikiny amin'ny alalan'ny fiarovana ny zon'ireo ankizy lasibatra ao Syria. (Krizin'ny Ankizy Ao Syria: Ahoana Ny Fomba Hanampianao)
UNICEF (nitranga in-3) : Ao Royaume-Uni, London, fantaro fa ao amin'ny Metro an-tanàn-dehibe, misy dokambarotry ny UNICEF mba hanohanana ny ankizy ao Syria, manomeza 5 livres). (Krizin'ny Ankizy Ao Syria: Ahoana Ny Fomba Hanampianao)
Reboza (nitranga in-1) : «Afaka 10 na 15 andro eo ho eo fara fahafantarany dia hanolotra izay anarana kandidà izay amintsika ny Filohan'ny tetezamita», araka ny nomarihin'ny Filoha mpitarika ny Udr-Fanovana, Reboza Julien teny an-toerana, nandritra ny fihaonany tamin'ireo mpanao politika miara-dia aminy ao anatin'ity vondrona politika akaiky ny Filohan'ny tetezamita ity. (Fanolorana kandida – Nanome fahalalahana tanteraka an-dRajoelina ny Udr-Fanovana)
Global (nitranga in-2) : Sary: Global Research
Mizarà tantara sy sarin' ireo Ankizy ao Syria ao amin'ny Facebook. (Krizin'ny Ankizy Ao Syria: Ahoana Ny Fomba Hanampianao)
fampiakarana (nitranga in-1) : alain Soumoudronga, sekretera jeneralin'ny Gpm
Taorian'ny famerana ny vidin-tsolika ambony indrindra azo ampiharina sy ny fanitsian'ireo mpana- tsinjara solika ny vidin-tsoliny hanakatra io vidin- tsolika ambony indrindra azo atao io, dia hisantatra ny fivoriana voalohany amin'ny handinihana ny fampiakarana na tsia ny vidin-tsolika ireo tompon' andraiki-panjakana na ireo mpandraharaha ara-tsolika amin'ity volana febroary ity. (Fandraharahana – Antomotra ny fivoriana momba ny fihetsehan’ny vidin-tsolika)
nozaraina (nitranga in-1) : Ar 13 900 indray no nozaraina tamin'ireo mpilalao 245 nahita ny laharana telo. (Tapatapany)
Halilhodzic (nitranga in-1) : LEO
Naneho hakiviana amin' ny mbola hitantana ny Fennecs Alzeriana i Vahid Halilhodzic. (Anjoron- »CAN »)
tatazana (nitranga in-1) : Raha ny fanazavan'ireo mponina avy any an-toerana dia ny ranon'orana nateraky ny fandalovan'ilay rivo-doza Felleng no tatazana sy sotroin'izy ireo ankehitriny. (Famatsiana rano – Telo andro nisotroana orana ny mponin’Antsiranana)
뒤적거리다보니 (nitranga in-1) : @9it nanampy [ko]:
북한 상세 지도 찾아볼 생각은 한번도 안해봤는데, 지금 뒤적거리다보니 뭔가 신기하네요. (Google Mamoaka Ny Sarintanin'i Korea Avaratra Hifandrimbonana)
hahita (nitranga in-1) : Na dia izany aza, ankizy Syriana tsy tambo isaina no mitebiteby fatratra tsy hahita intsony ny trano fonenany, ny fananany, ary ny ray aman-dreniny. (Krizin'ny Ankizy Ao Syria: Ahoana Ny Fomba Hanampianao)
kolotoraly (nitranga in-2) : ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny Trano kolotoraly malagasy mikarakara ny taom-baobao malagasy
Miova isan-taona ny daty. (Fomba amam-panao – Hankalazaina ny 11 sy 12 marsa ny taom-baovao malagasy)
جمعية (nitranga in-1) : Fiarahamonina ao amin'ny faritra izay manampy ireo ankizy Syriana:
جمعية سردة للتنمية SRDH Association for Development (Fikambanana ho an'ny Fampandrosoana) مؤسسة الإغاثة والتنمية الإنسانية السورية Najda-Now International E. (Krizin'ny Ankizy Ao Syria: Ahoana Ny Fomba Hanampianao)
ville (nitranga in-1) : Miendrika lalao famaranana ho an'ny “Grand Tournoi de la ville d'Antananarivo” andiany voalohany, karakarain' ny ligin'Analamanga sy ny kaominina Antananarivo renivohitra ny fihaonana farany eo amin'izy ireo, etsy amin'ny kianjaben'i Mahamasina, rahampitso. (Kitra « Grand tournoi de Tana » – Hiady Ar 2 tapitrisa ny AS Adema sy Cnaps Sport)
hijery (nitranga in-1) : (Raha hijery ny dika Koreana, tsindrio eto)
nifandrimbonana (nitranga in-1) : Tamin'ny 29 Jan 2013 no namoahan'i Google ny sarintanin'i Korea Avaratra nifandrimbonana, telo herinandro monja nitsidihan'ny tale jeneralin'ny Google, Eric Schmidt, tao amin'ny firenena. (Google Mamoaka Ny Sarintanin'i Korea Avaratra Hifandrimbonana)
Betongolo (nitranga in-1) : Barphil Andriantsiferanarivo Fandaharan-dalao Sabotsy 2 febroary : 08H: BAD TEAM Alarobia # BFT Ivato (senior DAME) 09H30: BEMIRAY # DREAM TEAM (senior HOMME »A ») 11H: MADASPORT # BAD TEAM Alarobia (senior HOMME »B ») 13H00: TMB2A Ambohimirary # BCS Soamanandrariny (U20 Garcon) 14H00: BCS Soamanandrariny # JSM Ambohipo (senior HOMME »B ») Alahady 3 febroary: 08H: JBC Betongolo # AMBATOBE (senior HOMME »B ») 09H30: AMBATOBE # BAD TEAM Alarobia (senior HOMME »B ») 11H: CHALLENGER # TMB2A (U16.... (« Fety de baskety » – Hamaramparana ny fifanin- tsanana ny eny Andraisoro)
Randriamiarantsoa (nitranga in-1) : Faly Randriamiarantsoa. (Fomba amam-panao – Hankalazaina ny 11 sy 12 marsa ny taom-baovao malagasy)
Henjankenjana (nitranga in-1) : Henjankenjana ny miandry azy ireo amin'ity, satria ny Tam Anosibe, izay havanana amin'ny lalaon'ireo lohalaharana no hifanandrina aminy eo amin'ny famaranana. (Rugby Amboaran’ny filoha – Lalaon’ny samy goavana ny an’ny 3FB sy Tam Anosibe)
nampiasaina (nitranga in-1) : Tsy vita ny maraina ny fanamboarana ireo fiara ireo, ka tsy maintsy nampiasaina hatramin'ny hariva io fiara nofaina io”, hoy ny fanazavana avy amin-dRajernerson Aubin, talen'ny fonjan'Antanimora. (Fandriampahalemana – Entina amin’ny taksibe ireo voafonja hotsaraina)
Libanona (nitranga in-2) : Ao amin'ny Facebook: Save Syrian children
Sylvie (nitranga in-1) : Isan'ireo tsy afaka hilalao i Elisa Mampionona Raharimalala sy Sylvie Seta Antoinette ary Sonia Razanamalala na i Lydia noho ny antony ara-pahasalamana. (Volley ball Afrika – Tsy handray anjara amin’ ny fifaninanana ny Stef’Auto)
Korea (nitranga in-13) : Saingy misy toerana iray tsy ahatafidirana matetika, na dia amin'ny alalan'ny Google Maps aza, dia ilay fanjakana mitoka-monina: Korea Avaratra. (Google Mamoaka Ny Sarintanin'i Korea Avaratra Hifandrimbonana)
Baudin (nitranga in-1) : Baudin kosa ny «Tananarive, ses rues, ses quartiers», manazava sy mitantara ireo anarana tanàna sy toerana samihafa eto Madagasikara. (Literatiora – Nivoaka ny boky roa an- dRabearivelo nohavaozina)
faritry (nitranga in-1) : “Midadasika loatra ny faritry ny onivresite. (Ankatso – Misy adala mampatahotra mirenireny)
naratra (nitranga in-1) : An'arivony mahery ireo naratra, nogadraina sy tsy tafahaona intsony tamin'ny fianakaviany, na tsy nahazo fitsaboana sy fanampiana maha-olona. (Krizin'ny Ankizy Ao Syria: Ahoana Ny Fomba Hanampianao)
Nasongady (nitranga in-1) : Nasongadin' i @premist [ko] ny fahasamihafan'ny kalitaon'ny sarintanin'ny Korea roa tonta:
한국에서는 법 때문에(혹은 구글이 귀찮아서) 안 되는 Google 벡터 지도가 북한 평양에서는 되네요 Tsy misy tsilo ny sarintanin'i Korea atsimo noho ny lalàna mivoaka (na angamba kamo loatra ny Google hanangana iray. (Google Mamoaka Ny Sarintanin'i Korea Avaratra Hifandrimbonana)
tribonaly (nitranga in-1) : Hagagana ny an'ny olona rehetra teny amin'ny tribonaly Anosy, omaly, nahita ireo voafonja nentina tamin' ny fiara taksibe, zotra 128 mampitohy an'i Mahamasina sy Ankatso, raha fiara mano- kana no noheverin'ny rehetra fa fitondrana azy ireo hatramin'izay. (Fandriampahalemana – Entina amin’ny taksibe ireo voafonja hotsaraina)
antsipirihany (nitranga in-2) : (Raha hijery ny dika Koreana, tsindrio eto)
talen' (nitranga in-4) : Tsy vita ny maraina ny fanamboarana ireo fiara ireo, ka tsy maintsy nampiasaina hatramin'ny hariva io fiara nofaina io”, hoy ny fanazavana avy amin-dRajernerson Aubin, talen'ny fonjan'Antanimora. (Literatiora – Nivoaka ny boky roa an- dRabearivelo nohavaozina)
Ivato (nitranga in-1) : Barphil Andriantsiferanarivo Fandaharan-dalao Sabotsy 2 febroary : 08H: BAD TEAM Alarobia # BFT Ivato (senior DAME) 09H30: BEMIRAY # DREAM TEAM (senior HOMME »A ») 11H: MADASPORT # BAD TEAM Alarobia (senior HOMME »B ») 13H00: TMB2A Ambohimirary # BCS Soamanandrariny (U20 Garcon) 14H00: BCS Soamanandrariny # JSM Ambohipo (senior HOMME »B ») Alahady 3 febroary: 08H: JBC Betongolo # AMBATOBE (senior HOMME »B ») 09H30: AMBATOBE # BAD TEAM Alarobia (senior HOMME »B ») 11H: CHALLENGER # TMB2A (U16.... (« Fety de baskety » – Hamaramparana ny fifanin- tsanana ny eny Andraisoro)
manerantany (nitranga in-1) : Fizarana ny hetsika amin'ny alalan'ny Rise 4 humanity izay:
Hetsika natokana hanairana ny sain'ny vahoaka manoloana ny heloka atao amin'ny olombelona manerantany ary hanampy amin'ny fampitsaharana izany, ka voalohany amin'izany ny habibiana mihatra amin'ireo ankizy ao Syria. (Krizin'ny Ankizy Ao Syria: Ahoana Ny Fomba Hanampianao)
sahaniny (nitranga in-1) : Notsindrian'ity mpitarika ny delegasionan'ny ankolafy Zafy teo aloha ity fa «tokony samy hanaja ny toerana misy azy sy ny andraikitra sahaniny ny roa tonta». (Disadisa amin-dRajoelina – Niaro an’i Beriziky Rakotovahiny sy i Voninahitsy)
afak' (nitranga in-2) : Naiditra am-ponja vonjimaika eny amin'ny fonjan' Antanimora ireo telo lahy voatondro fa mpangalatra entana anaty fiara tra-tehaky ny polisy tetsy Andrefan'Ambohijana-hary, afak'omaly. (Famatsiana rano – Telo andro nisotroana orana ny mponin’Antsiranana)
Mada (nitranga in-1) : Ny Tam dia nandavo ny Tfma, izay ekipa lefitry ny tompondakan'i Mada gasikara tamin'ny taon-dasa, teo amin'ny manasa-dalana tamin'ny alalan'ny isa tery dia tery 15 no ho 14. (Rugby Amboaran’ny filoha – Lalaon’ny samy goavana ny an’ny 3FB sy Tam Anosibe)
nikotrika (nitranga in-1) : Ny iray taminay efa-dahy ihany no atidoha nikotrika an'ilay fanafihana. (Betroka – Latsa-nenina ireo voatondro ho nanafika ny pasitera Rasendrahasina)
Raholdina (nitranga in-1) : Izay kandidà atolony eo dia tsy maintsy ekena», hoy ny fanamarihana nataon' ny sekretera jeneralin'ny Udr-Fanovana, Naivo Raholdina, tetsy amin'ny «Relais de la haute ville», omaly maraina. (Fanolorana kandida – Nanome fahalalahana tanteraka an-dRajoelina ny Udr-Fanovana)
maroahina (nitranga in-1) : Efa fomba fanao hatramin'ny 1991 io”, hoy kosa Ranaivo Andria- maroahina Tovonjanahary, tale jeneralin'ny fandraharahana ny fonja eo anivon'ny minisiteran'ny Fitsarana. (Fandriampahalemana – Entina amin’ny taksibe ireo voafonja hotsaraina)
lasibatry (nitranga in-1) : « Fokontany roa no efa lasibatry ny asa ratsy nataon'ilay lehilahy izay vao 37 taona. (Fanararaotana – Zary lasa fitondra misoloky ny anaran’ny Jirama)
tompondakan' (nitranga in-3) : fantatra izao fa tsy handray anjara amin'ny fifaninanana fiadiana izay ho tompon'ny amboaran' i Afrika ho an'ny ekipa tompondaka, ny Stef'Auto, izay tompondakan'i Mada- gasikara. (Rugby Amboaran’ny filoha – Lalaon’ny samy goavana ny an’ny 3FB sy Tam Anosibe)
hanampianao (nitranga in-1) : Fampianarana Ambony Iraisam-pirenena (Institute of International Education): Krizin'ny Fampianarana ao Syria: Ahoana no fomba hanampianao
Fikambanana ao an-toerana sy iraisam-pirenena maherin'ny 32 no manome Fiarovana ny Ankizy, izay avy ao Iraka, Libanona, Jordana sy Ejypta ao amin'ny habaky ny mpitsoam-ponenana Syriana UNHCR. (Krizin'ny Ankizy Ao Syria: Ahoana Ny Fomba Hanampianao)
Crimes (nitranga in-1) : org: Tongava manatevina ny hetsika Stop the Crimes Against Syria's Children (Atsaharo ny Heloka Atao amin'ireo Ankizy ao Syria)
Soniavo ny Fanangonan-tsonia: Manampia amin'ny fizarana ireo habaka sy fanangonan-tsonia ireto amin'ny namanao sy ireo solontenam-panjakana. (Krizin'ny Ankizy Ao Syria: Ahoana Ny Fomba Hanampianao)
Nadika (nitranga in-1) : Boky roa nosoratan' i Jean Joseph Rabearivelo no nohavaozin'ny Bank Of Afrika ny fanontana azy, ka natolotr'izy ireo ny tranombokim-pirenena etsy Anosy omaly : «Traduit de la nuit na Nadika tamin'ny alina» sy ny «Tananarive ses rues, ses quartiers». (Literatiora – Nivoaka ny boky roa an- dRabearivelo nohavaozina)
koreana (nitranga in-1) : @leftliber moa lasa be ahiahy tafahoatra [ko] momba ilay lalàna hafa, ilay Lalànan'ny Fiarovam-Pirenena izay manivana izay rehetra misy ifandraisany amin'i Korea Avaratra ka nampigadra ilay Twittere Koreana Tatsimo noho izy nampita sioka koreana tavaratra:
오, 구글 지도에 드디어 북한이. (Google Mamoaka Ny Sarintanin'i Korea Avaratra Hifandrimbonana)
coffre (nitranga in-1) : Vao tafiditra tao an-trano anefa izy ireo dia noba-tainy ny « coffre » nisy vola. (Fanararaotana – Zary lasa fitondra misoloky ny anaran’ny Jirama)
MADASPORT (nitranga in-1) : Barphil Andriantsiferanarivo Fandaharan-dalao Sabotsy 2 febroary : 08H: BAD TEAM Alarobia # BFT Ivato (senior DAME) 09H30: BEMIRAY # DREAM TEAM (senior HOMME »A ») 11H: MADASPORT # BAD TEAM Alarobia (senior HOMME »B ») 13H00: TMB2A Ambohimirary # BCS Soamanandrariny (U20 Garcon) 14H00: BCS Soamanandrariny # JSM Ambohipo (senior HOMME »B ») Alahady 3 febroary: 08H: JBC Betongolo # AMBATOBE (senior HOMME »B ») 09H30: AMBATOBE # BAD TEAM Alarobia (senior HOMME »B ») 11H: CHALLENGER # TMB2A (U16.... (« Fety de baskety » – Hamaramparana ny fifanin- tsanana ny eny Andraisoro)
taksibe (nitranga in-2) : nahasarika ny mason'ny olona maro ny nahita ireo voafonja tao anaty taksibe
Zavatra tsy ampoizina nefa nisy. (Fandriampahalemana – Entina amin’ny taksibe ireo voafonja hotsaraina)
anatiny (nitranga in-2) : 764 no voaisa na miandry fanisana ao anatiny na ivelan'i Syria. (Krizin'ny Ankizy Ao Syria: Ahoana Ny Fomba Hanampianao)
Ankadifotsy (nitranga in-2) : Teo amin'ny manasa-dalana dia nanilika ny US Ankadifotsy tamin' ny alalan'ny isa 18 no ho 15 ny ekipan'ny minisiteran' ny Fahasalamam-bahoaka. (Rugby Amboaran’ny filoha – Lalaon’ny samy goavana ny an’ny 3FB sy Tam Anosibe)
Andranomahery (nitranga in-1) : Isan'ny ahiana amin'izany ny etsy amin'ny fokontany Ankorondrano Andranomahery sy teny Anosizato. (Valanaretina – Nametrahana toeram-pitsaboana eny akaikin’ ireo tra-boina)
niadiana (nitranga in-1) : LALAO VINTANA
Mpilalao 3 340 be izao no nifampitsinjara Ar 11 621 300 nandritra ny fisarihan'ny lalao Peo ny dimy, niadiana ilay tontona Ar 15 tapitrisa ny 31 janoary lasa teo. (Tapatapany)
habaky (nitranga in-2) : Manomeza boky hanampiana amin'ny fianaran'ny ankizy Syriana amin'ny alalan'ny habaky ny “Just Giving website”: Books4Syria (Boky ho an'i Syria)
Manolora ao amin'ny “Safeworld” mba hanome fanohanana ny sekoly ao amin'ny tobin'ireo mpitsoa-ponenana Zaatari fantatra amin'ny hoe “tobin'ny ankizy” satria latsaky ny 18 taona avokoa ny antsasany mahery amin'ireo mpitsoa-ponenana 33. (Krizin'ny Ankizy Ao Syria: Ahoana Ny Fomba Hanampianao)
endrikendriky (nitranga in-1) : Araka ny fantatra dia mety tsy hanolotra anarana mba hisafidianan'ny Filoha mpanorina ny antoko Tanora malaGasy Vonona akory ity vondrona ity, fa hihanona amin'ny fano-mezana izay endrikendriky ny olona tokony harotsaka. (Fanolorana kandida – Nanome fahalalahana tanteraka an-dRajoelina ny Udr-Fanovana)
nanaovany (nitranga in-2) : Nilaza izy fa dimy volana izay no nanaovany ity asa fisolokiana ity ary teny Alakamisy Fenoarivo sy Ambatomaro no nanaovany izany teo aloha », hoy ny loharanom-baovao avy amin'ny zandary any Arivonimamo, izay nanao ny famotorana. (Fanararaotana – Zary lasa fitondra misoloky ny anaran’ny Jirama)
nentina (nitranga in-1) : Hagagana ny an'ny olona rehetra teny amin'ny tribonaly Anosy, omaly, nahita ireo voafonja nentina tamin' ny fiara taksibe, zotra 128 mampitohy an'i Mahamasina sy Ankatso, raha fiara mano- kana no noheverin'ny rehetra fa fitondrana azy ireo hatramin'izay. (Fandriampahalemana – Entina amin’ny taksibe ireo voafonja hotsaraina)
lefitry (nitranga in-1) : Ny Tam dia nandavo ny Tfma, izay ekipa lefitry ny tompondakan'i Mada gasikara tamin'ny taon-dasa, teo amin'ny manasa-dalana tamin'ny alalan'ny isa tery dia tery 15 no ho 14. (Rugby Amboaran’ny filoha – Lalaon’ny samy goavana ny an’ny 3FB sy Tam Anosibe)
hanainga (nitranga in-1) : “Tratran'ny fahasamponana tampoka ireo fiara lehibe roa tato aminay, raha handeha hanainga ny maraina. (Fandriampahalemana – Entina amin’ny taksibe ireo voafonja hotsaraina)
Alasora (nitranga in-1) : Singanina manokana ilay loza mahatsiravina tetsy Ambohidahy Ankadindramamy tamin'ny taon-dasa; dia vao iny omaly iny saika nitera-doza goavana ihany koa ny tranga niseho teny Alasora. (Tsisy mihaino, mody tsy mahita)
Luanda (nitranga in-1) : Ho an'ny AS Adema dia efa fanomanana sahady ireo mpilalao hiatrika an'i Primeiro de Agosto avy any Angola, eo amin'ny fihodinana voalohany ho an'ny fiadiana ny amboaran'i Afrika izany, ny sabotsy 16 febroary 2013 ao amin'ny kianja 11 novambra ao Luanda. (Kitra « Grand tournoi de Tana » – Hiady Ar 2 tapitrisa ny AS Adema sy Cnaps Sport)
Andohalo (nitranga in-2) : Ankoatra ny eny Ambohi- trabiby, izay niandohan' ny taom-baovao malagasy tamin'ny andron-dRalambo, dia handray ireo hetsika rehetra amin'ity taona ity ihany koa ny kianjan' Andohalo. (Fomba amam-panao – Hankalazaina ny 11 sy 12 marsa ny taom-baovao malagasy)
Rasoarahona (nitranga in-1) : Efa misy faritra nofefena toy izany ao amin' ny Agronomie,ka mpianatra ihany no afaka mandeha amin'izany”, hoy indray Rasoarahona Jean, talen' ny sampam-pianarana Agronomie. (Ankatso – Misy adala mampatahotra mirenireny)
lahatsary (nitranga in-3) : Mampiseho ny tranga mahazo ireo ankizy Syriana ity lahatsary manaraka avy amin'ny Rise 4 Humanity ity [Tandremo: sary mampihoro-koditra, ahitana fatin'ankizy]. (Krizin'ny Ankizy Ao Syria: Ahoana Ny Fomba Hanampianao)
distrika (nitranga in-1) : tRANON'NY TANORA
Hitarina eny anivon'ireo distrika ny fametrahana ny tranon'ny tanora, raha teny amin'ny faritra no nahitana izany teo aloha. (Tapatapany)
manantsiny (nitranga in-1) : Ity lahatsary manaraka ity, Ao anatin'ny Hatsiaka: miaritra ny ririnina ireo fianakaviana mpitsoa-ponenana Syriana, lahatsary navoakan'ny savethechildrenuk mba hampisehoana ny filàn'ny ankizy sy ny fanangonam-bola ho an'ireo ankizy mpitsoa-ponenana:
pirenena (nitranga in-1) : «Tsy mora ny manazatra ny ekipam- pirenena alzerianina. (Anjoron- »CAN »)
tranomboky (nitranga in-1) : Ny Vohitsera Production kosa no niantsoroka ny famokarana
natolotr' (nitranga in-1) : Boky roa nosoratan' i Jean Joseph Rabearivelo no nohavaozin'ny Bank Of Afrika ny fanontana azy, ka natolotr'izy ireo ny tranombokim-pirenena etsy Anosy omaly : «Traduit de la nuit na Nadika tamin'ny alina» sy ny «Tananarive ses rues, ses quartiers». (Literatiora – Nivoaka ny boky roa an- dRabearivelo nohavaozina)
dikan' (nitranga in-1) : @leejik manontany tena [ko] manontany ny dikan'izany fiovana izany:
구글지도에 북한 지도가 이제 제대로 뜨기 시작했네요. (Google Mamoaka Ny Sarintanin'i Korea Avaratra Hifandrimbonana)
mora (nitranga in-2) : Sao ho mora voalemy sy resen'ny antsoantson'ny sasany hoe io indray fa « manao tsindrio fa lavo » sy ny « tsindrihazolena » ary ny fanenjehana foana ny « madinika ». (Anjoron- »CAN »)
Iantsorohany (nitranga in-1) : Iantsorohany avokoa rehefa asa rehetra mahakasika ny fiantsenana, toy fividianana ny entana ilaina andavanandro, fanaka…
Miankina amin'ny halaviran'ny toerana ana- terana sy ividianana ny entana hafaran'ny mpanjifa kosa ny sarany aloa. (Fanjifana – Efa iainana eto ny fiantsoana orinasa manokana hiantsena sy irakirahina)
Lycée (nitranga in-1) : ramambason Andrialaza, mametaka ny fitaovana mamokatra hydrôzena hanampiana solika ampiasain'ity môtô ity
시작했네요 (nitranga in-1) : @leejik manontany tena [ko] manontany ny dikan'izany fiovana izany:
StumbleUpon (nitranga in-2) : Mpanoratra Rami Alhames · Nandika Mamisoa
· vakio ato ny lahatsoratra nadika  [en] · hevitra (0) Zarao: facebook · twitter · reddit · StumbleUpon · delicious · Instapaper. (Google Mamoaka Ny Sarintanin'i Korea Avaratra Hifandrimbonana)
hisolo (nitranga in-1) : nanome safidy mala-laka ny Filohan'ny tetezamita, Andry Rajoelina, hanendry izay kandidà hisolo azy hirotsaka amin' ny fifidianana Filoham-pirenena ny vondrona politika Udr-Fanovana. (Fanolorana kandida – Nanome fahalalahana tanteraka an-dRajoelina ny Udr-Fanovana)
saintsainina (nitranga in-1) : Sary: Save the Children
Amin'izao zava-iainana izao, mikorontana tanteraka ny fepetram-pampandrosoana ilaina amin'ny fivelaran'ny ankizy, ary tsy hay saintsainina intsony ny fahasimbana ara-tsaina ateraky ny ady mitam-piadiana…. (Krizin'ny Ankizy Ao Syria: Ahoana Ny Fomba Hanampianao)
ahitanay (nitranga in-1) : “Eny amin'ny efitrano fianarana lehibe iray somary manamorona hazo no ahitanay io lehilahy io matetika. (Ankatso – Misy adala mampatahotra mirenireny)
1991 (nitranga in-1) : Efa fomba fanao hatramin'ny 1991 io”, hoy kosa Ranaivo Andria- maroahina Tovonjanahary, tale jeneralin'ny fandraharahana ny fonja eo anivon'ny minisiteran'ny Fitsarana. (Fandriampahalemana – Entina amin’ny taksibe ireo voafonja hotsaraina)
Antanimora (nitranga in-1) : Naiditra am-ponja vonjimaika eny amin'ny fonjan' Antanimora ireo telo lahy voatondro fa mpangalatra entana anaty fiara tra-tehaky ny polisy tetsy Andrefan'Ambohijana-hary, afak'omaly. (Tapatapany)
Mananara (nitranga in-1) : Navoakan'ny tatitry ny Birao nasionaly misahana ny fitantanana ny loza voajanahary (Bngrc) omaly, fa olona efatra indray no tsy hita popoka, iray tany Mananara Avaratra, iray tany Midongy Atsimo, roa tany Mampikony. (Rivo-doza felleng – Olona efatra indray no tsy hita popoka)
Rakotoarinala (nitranga in-1) : Betsaka amin'ireo vehivavy ihany koa no miakatra tosi-dra”, hoy ny Dr Rakotoarinala Clémencau, lehiben'ny Csb Antanimena, teny Ankorondrano, omaly. (Valanaretina – Nametrahana toeram-pitsaboana eny akaikin’ ireo tra-boina)
hetintra (nitranga in-1) : asa na hatramin'ny rahoviana ny fanjakana vao ho tonga saina fa ny gaboraraka amin'ny fitsirihana ireo fiara afaka mivezivezy sy ny fametrahana fanamafisana ny fanaraha-maso ireo fiara mifamoivoy eny an-dalam-be no isan'ny fepetra tena hetintra fisorohana ny lozam-pifamoivoizana hamoizana ain'olona maro eto amintsika. (Tsisy mihaino, mody tsy mahita)
Romuald (nitranga in-2) : Olona am- polony isan'andro eto an-drenivohitra no tena mpanjifa tsy tapaka momba izany », hoy Rabehaja Willy Romuald, tompon'andraikitra ao amin' ny orinasa iray misahana io raharaha io. (Fanjifana – Efa iainana eto ny fiantsoana orinasa manokana hiantsena sy irakirahina)
Children (nitranga in-4) : Sary: Save the Children
Faralala (nitranga in-4) : Faralala. (Fanararaotana – Zary lasa fitondra misoloky ny anaran’ny Jirama)
들여다보다가 (nitranga in-1) : 근데 혹 이거 들여다보다가 국가보안법 걸리는 건 아닌가. (Google Mamoaka Ny Sarintanin'i Korea Avaratra Hifandrimbonana)
지도까지 (nitranga in-1) : @romanticity anisan'ny nanoratra [ko]:
북한 구글지도 예전에는 퀄리티가 별로였는데 이젠 상세한 지도까지 서비스되네요 실향민이나 탈북자들 좋으실듯. (Google Mamoaka Ny Sarintanin'i Korea Avaratra Hifandrimbonana)
onivresite (nitranga in-1) : “Midadasika loatra ny faritry ny onivresite. (Ankatso – Misy adala mampatahotra mirenireny)
kianjaben' (nitranga in-1) : Miendrika lalao famaranana ho an'ny “Grand Tournoi de la ville d'Antananarivo” andiany voalohany, karakarain' ny ligin'Analamanga sy ny kaominina Antananarivo renivohitra ny fihaonana farany eo amin'izy ireo, etsy amin'ny kianjaben'i Mahamasina, rahampitso. (Kitra « Grand tournoi de Tana » – Hiady Ar 2 tapitrisa ny AS Adema sy Cnaps Sport)
toromarika (nitranga in-1) : Ity minisitera ity izay milaza ny hanampy betsaka ny Cenit amin' ny fanentanana ny olona amin'ny fifidianana sy hitondra ny anjara biri-kiny amin'ny fanome-zana toromarika ny mpifidy amin'ny fiatrehana izay fifidianana izay. (Sombiny)
vezena (nitranga in-1) : “Efa miezaka manamafy ny fanaraha-maso ny fivezi- vezena ety an-toerana ny mpiasa. (Ankatso – Misy adala mampatahotra mirenireny)
tsindrihazolena (nitranga in-1) : Sao ho mora voalemy sy resen'ny antsoantson'ny sasany hoe io indray fa « manao tsindrio fa lavo » sy ny « tsindrihazolena » ary ny fanenjehana foana ny « madinika ». (Tsisy mihaino, mody tsy mahita)
idiran' (nitranga in-1) : Tsentsin'ireo fako ireo ny baravy misakana ireo fako eo amin'ny vava fantsona idiran'ny rano, ka mahatonga ireo faritra maro tsy voavatsy rano. (Famatsiana rano – Telo andro nisotroana orana ny mponin’Antsiranana)
voninahitsy (nitranga in-1) : Tetsy an-kilan'izay dia naneho ny tsy fankasitrahany ny fanaovana antsojay amin'ny Lehiben'ny governemanta ihany koa ny filohan'ny vondrona politika «Les As»», voninahitsy Jean Eugène. (Disadisa amin-dRajoelina – Niaro an’i Beriziky Rakotovahiny sy i Voninahitsy)
AMBATOBE (nitranga in-2) : Barphil Andriantsiferanarivo Fandaharan-dalao Sabotsy 2 febroary : 08H: BAD TEAM Alarobia # BFT Ivato (senior DAME) 09H30: BEMIRAY # DREAM TEAM (senior HOMME »A ») 11H: MADASPORT # BAD TEAM Alarobia (senior HOMME »B ») 13H00: TMB2A Ambohimirary # BCS Soamanandrariny (U20 Garcon) 14H00: BCS Soamanandrariny # JSM Ambohipo (senior HOMME »B ») Alahady 3 febroary: 08H: JBC Betongolo # AMBATOBE (senior HOMME »B ») 09H30: AMBATOBE # BAD TEAM Alarobia (senior HOMME »B ») 11H: CHALLENGER # TMB2A (U16.... (« Fety de baskety » – Hamaramparana ny fifanin- tsanana ny eny Andraisoro)
fiatrehana (nitranga in-2) : Milaza ny hanangana vovonana iray lehibe izay hisokatra amin'ireo antoko politika hafa hiara-hiasa aminy amin'ny fiatrehana ny fifidianana ihany koa ireo mpitantana ity vondrona politika ity. (Sombiny)
nanoratra (nitranga in-1) : @romanticity anisan'ny nanoratra [ko]:
Agronomie (nitranga in-1) : Efa misy faritra nofefena toy izany ao amin' ny Agronomie,ka mpianatra ihany no afaka mandeha amin'izany”, hoy indray Rasoarahona Jean, talen' ny sampam-pianarana Agronomie. (Ankatso – Misy adala mampatahotra mirenireny)
handrafitra (nitranga in-1) : Ny tsy fahampiana isa eo amin'ireo mpilalao handrafitra izany ekipa izany no antony voalohany tsy handraisan'ny Stef'Auto anjara. (Volley ball Afrika – Tsy handray anjara amin’ ny fifaninanana ny Stef’Auto)
Hampitsaharana (nitranga in-1) : Nandefa fanentanana Hampitsaharana ny Heloka Atao Amin'ireo Ankizy ao Syria ny “Save the Children” (Vonjeo ny ankizy). (Krizin'ny Ankizy Ao Syria: Ahoana Ny Fomba Hanampianao)
Raoeliarisaina (nitranga in-1) : Mila tandremana ihany koa ny mety hidiran'ny rano any anaty maotera », hoy Raoeliarisaina Colomba, mpampianatra fizika. (Fitsitsiana angovo – Efa misy mampiofana ny fampandehanana ny fiara amin’ny rano)
Nangony (nitranga in-1) : Nangonin'i R. (Anjoron- »CAN »)
nahafantaranay (nitranga in-1) : Niseho anefa ny olana teo aminay rehefa nivoaka an-gazety ny raharaha ny ampitson'io, satria tamin' izany no nahafantaranay fa nisy lelavola maherin'ny 2 tapitrisa ariary very. (Betroka – Latsa-nenina ireo voatondro ho nanafika ny pasitera Rasendrahasina)
Nametrahan' (nitranga in-1) : Nametrahan'ny minisiteran'ny Fahasalamana sy ny kaominina Antananarivo renivohitra (Cua) toeram-pitsaboana, omaly ireo toerana roa ireo. (Valanaretina – Nametrahana toeram-pitsaboana eny akaikin’ ireo tra-boina)
Syria (nitranga in-13) : 355 eo no namoy ny ainy (hatramin'ny 15/1/2013) ao anatin'izao ady ao Syria izao, araka ny tatitra farany navoakan'ny Angon'ny Martioran'ny Revolisiona Syriana. (Krizin'ny Ankizy Ao Syria: Ahoana Ny Fomba Hanampianao)
hifanandrina (nitranga in-1) : Henjankenjana ny miandry azy ireo amin'ity, satria ny Tam Anosibe, izay havanana amin'ny lalaon'ireo lohalaharana no hifanandrina aminy eo amin'ny famaranana. (Rugby Amboaran’ny filoha – Lalaon’ny samy goavana ny an’ny 3FB sy Tam Anosibe)
Barphil (nitranga in-1) : Barphil Andriantsiferanarivo Fandaharan-dalao Sabotsy 2 febroary : 08H: BAD TEAM Alarobia # BFT Ivato (senior DAME) 09H30: BEMIRAY # DREAM TEAM (senior HOMME »A ») 11H: MADASPORT # BAD TEAM Alarobia (senior HOMME »B ») 13H00: TMB2A Ambohimirary # BCS Soamanandrariny (U20 Garcon) 14H00: BCS Soamanandrariny # JSM Ambohipo (senior HOMME »B ») Alahady 3 febroary: 08H: JBC Betongolo # AMBATOBE (senior HOMME »B ») 09H30: AMBATOBE # BAD TEAM Alarobia (senior HOMME »B ») 11H: CHALLENGER # TMB2A (U16.... (« Fety de baskety » – Hamaramparana ny fifanin- tsanana ny eny Andraisoro)
hitsarana (nitranga in-1) : ekipa samy mitana ny lohany eo amin'ireo sokajy misy eto Mada- gasikara ny 3FB sy ny Tam Anosibe, raha ny fiadiana ny amboaran'ny Filoha, no hitsarana azy ireo. (Rugby Amboaran’ny filoha – Lalaon’ny samy goavana ny an’ny 3FB sy Tam Anosibe)
하는건가 (nitranga in-1) : 이제 개방을 하는건가. (Google Mamoaka Ny Sarintanin'i Korea Avaratra Hifandrimbonana)
hanaja (nitranga in-1) : Notsindrian'ity mpitarika ny delegasionan'ny ankolafy Zafy teo aloha ity fa «tokony samy hanaja ny toerana misy azy sy ny andraikitra sahaniny ny roa tonta». (Disadisa amin-dRajoelina – Niaro an’i Beriziky Rakotovahiny sy i Voninahitsy)
tafaporitsaka (nitranga in-1) : Vao tsy ela akory mantsy izay no nisy voafonja tafaporitsaka teny an-toerana. (Fandriampahalemana – Entina amin’ny taksibe ireo voafonja hotsaraina)
Makis (nitranga in-1) : Hiatrika ny lalao famaranana ho an'io fifaninanana io izy ireo amin'ny alahady izao, eny amin'ny kianja Makis Andohatapenaka. (Rugby Amboaran’ny filoha – Lalaon’ny samy goavana ny an’ny 3FB sy Tam Anosibe)
سردة (nitranga in-1) : Fiarahamonina ao amin'ny faritra izay manampy ireo ankizy Syriana:
mitsahatra (nitranga in-2) : Tsy afaka manaisotra ireo fako ireo anefa izahay raha tsy mitsahatra ny orana », hoy Ravalisoa Henri, talen' ny famatsian-drano eo anivon'ny Jirama. (Google Mamoaka Ny Sarintanin'i Korea Avaratra Hifandrimbonana)
nanondro (nitranga in-1) : Izy avy eo no nanondro ireo namany nanafika teny Ambatoroka, ka nahafahana nisambotra ireo telo hafa. (Betroka – Latsa-nenina ireo voatondro ho nanafika ny pasitera Rasendrahasina)
basket (nitranga in-1) : andro fifanintsanana faha-15 sy faha-16, ny sabotsy 2 sy alahady 3 febroary izao, eny amin'ny « fety de basket » eny amin'ny kianjan'Andraisoro. (« Fety de baskety » – Hamaramparana ny fifanin- tsanana ny eny Andraisoro)
facebook (nitranga in-2) : Mpanoratra Rami Alhames · Nandika Mamisoa
Giving (nitranga in-1) : Manomeza boky hanampiana amin'ny fianaran'ny ankizy Syriana amin'ny alalan'ny habaky ny “Just Giving website”: Books4Syria (Boky ho an'i Syria)
Willy (nitranga in-3) : Olona am- polony isan'andro eto an-drenivohitra no tena mpanjifa tsy tapaka momba izany », hoy Rabehaja Willy Romuald, tompon'andraikitra ao amin' ny orinasa iray misahana io raharaha io. (Literatiora – Nivoaka ny boky roa an- dRabearivelo nohavaozina)
fahavononany (nitranga in-1) : TAN-TSOROKA> Nana-mafy ny fahavononany hiantoka ny fangaraharahan'ny fifidianana koa ny minisitera misahana ny fampifandraisana ireo andrim-panjakan'ny tete-zamita. (Sombiny)
Ambohidahy (nitranga in-2) : Singanina manokana ilay loza mahatsiravina tetsy Ambohidahy Ankadindramamy tamin'ny taon-dasa; dia vao iny omaly iny saika nitera-doza goavana ihany koa ny tranga niseho teny Alasora. (Tsisy mihaino, mody tsy mahita)
haute (nitranga in-1) : Izay kandidà atolony eo dia tsy maintsy ekena», hoy ny fanamarihana nataon' ny sekretera jeneralin'ny Udr-Fanovana, Naivo Raholdina, tetsy amin'ny «Relais de la haute ville», omaly maraina. (Fanolorana kandida – Nanome fahalalahana tanteraka an-dRajoelina ny Udr-Fanovana)
fahazazana (nitranga in-2) : ireo ankizy, tsy afa-mitombo ao anatin'ny tonolon'ny fifampitokisana, dia tsy maintsy miatrika habibiana dieny mbola ao anatin'ny fahazazana tanteraka, matetika manamasaka ao anatiny ao fa fomba iray tahaka ny hafa hamahana ireo disadisa ny herisetra, ka sarotra ho azy ireo ny handefa hafatra ho amin'ny fandriampahalemana sy ny fiarovana erantany ho an'ny taranaka hoavy
Ahoana ny fomba hanampiana ireo ankizy Syriana. (Krizin'ny Ankizy Ao Syria: Ahoana Ny Fomba Hanampianao)
CHALLENGER (nitranga in-2) : Barphil Andriantsiferanarivo Fandaharan-dalao Sabotsy 2 febroary : 08H: BAD TEAM Alarobia # BFT Ivato (senior DAME) 09H30: BEMIRAY # DREAM TEAM (senior HOMME »A ») 11H: MADASPORT # BAD TEAM Alarobia (senior HOMME »B ») 13H00: TMB2A Ambohimirary # BCS Soamanandrariny (U20 Garcon) 14H00: BCS Soamanandrariny # JSM Ambohipo (senior HOMME »B ») Alahady 3 febroary: 08H: JBC Betongolo # AMBATOBE (senior HOMME »B ») 09H30: AMBATOBE # BAD TEAM Alarobia (senior HOMME »B ») 11H: CHALLENGER # TMB2A (U16.... (« Fety de baskety » – Hamaramparana ny fifanin- tsanana ny eny Andraisoro)
예전에는 (nitranga in-1) : @romanticity anisan'ny nanoratra [ko]:
aminity (nitranga in-1) : Iretsy ambany iretsy ny fandaharam-potoana ho aminity faranny herinandro ity. (« Fety de baskety » – Hamaramparana ny fifanin- tsanana ny eny Andraisoro)
Sadc (nitranga in-2) : mISALASALA > Tsy mbola nanambara ny mety ho fisiana fanapahan-kevitra hentitra momba ny fampodiana ny Filoha teo aloha, Marc Ravalomanana ny iraky ny vondrona Sadc, Leonardo Simao, raha nitafa fohy tamin'ny mpanao gazety, tetsy amin'ny Hotel Colbert, omaly. (Sombiny)
hanakatra (nitranga in-1) : alain Soumoudronga, sekretera jeneralin'ny Gpm
hamenoana (nitranga in-1) : Araka ny efa tapaka tamin'ny volana janoary iny dia efa nanambara ny Fanjakana fa hisy ny tahirim-bolan'ny solika hatsangana hamenoana ny banga ho an'izay tsy mampiakatra ny vidin-tsolika, raha toa tapaka fa hiakatra ny vidin-tsolika. (Fandraharahana – Antomotra ny fivoriana momba ny fihetsehan’ny vidin-tsolika)
Notsipihy (nitranga in-1) : Notsipihin'i Emmanuel Rakotovahiny, mpanolotsainan'ny Praimi- nisitra fa «tsy tokony hisy ny fanaovana tery vay manta amin'ny fandinihana na fandaniana io volavolan-dalàna io ary tsy anjaran' ny Filohan'ny tetezamita irery no mandidy sy mana- paka ny momba izany». (Disadisa amin-dRajoelina – Niaro an’i Beriziky Rakotovahiny sy i Voninahitsy)
ilàna (nitranga in-1) : Ny amin'ny tranga tahaka izao no tena ilàna ny voambolana « manara-penitra ». (Tsisy mihaino, mody tsy mahita)
hiasa (nitranga in-1) : Tsy ny olon'ny ankolafy Rajo- elina na Ravalomanana na Zafy na Ratsiraka irery no mety hiharan'ny lozam-pifamoivoizana vokatry ny haratsian'ireo fiara efa tsy tokony hiasa intsony. (Tsisy mihaino, mody tsy mahita)
Vohitsera (nitranga in-1) : Ny Vohitsera Production kosa no niantsoroka ny famokarana
Hanitry (nitranga in-1) : Hanitry Ny Aina. (Fandraharahana – Antomotra ny fivoriana momba ny fihetsehan’ny vidin-tsolika)
2013 (nitranga in-6) : nIVOAKA ALINA
Taorian'ny nahatafita an' i Togo voalohany teo amin'ny ampahefa-dalana ho an'ny Can 2013 dia nanao lanonana tany amina trano fandihizana iray tao Riverside ry Adebayor sy ny namany nankalaza izany fandresena izany. (Google Mamoaka Ny Sarintanin'i Korea Avaratra Hifandrimbonana)
HOMME (nitranga in-6) : Barphil Andriantsiferanarivo Fandaharan-dalao Sabotsy 2 febroary : 08H: BAD TEAM Alarobia # BFT Ivato (senior DAME) 09H30: BEMIRAY # DREAM TEAM (senior HOMME »A ») 11H: MADASPORT # BAD TEAM Alarobia (senior HOMME »B ») 13H00: TMB2A Ambohimirary # BCS Soamanandrariny (U20 Garcon) 14H00: BCS Soamanandrariny # JSM Ambohipo (senior HOMME »B ») Alahady 3 febroary: 08H: JBC Betongolo # AMBATOBE (senior HOMME »B ») 09H30: AMBATOBE # BAD TEAM Alarobia (senior HOMME »B ») 11H: CHALLENGER # TMB2A (U16.... (« Fety de baskety » – Hamaramparana ny fifanin- tsanana ny eny Andraisoro)
TMB2A (nitranga in-2) : Barphil Andriantsiferanarivo Fandaharan-dalao Sabotsy 2 febroary : 08H: BAD TEAM Alarobia # BFT Ivato (senior DAME) 09H30: BEMIRAY # DREAM TEAM (senior HOMME »A ») 11H: MADASPORT # BAD TEAM Alarobia (senior HOMME »B ») 13H00: TMB2A Ambohimirary # BCS Soamanandrariny (U20 Garcon) 14H00: BCS Soamanandrariny # JSM Ambohipo (senior HOMME »B ») Alahady 3 febroary: 08H: JBC Betongolo # AMBATOBE (senior HOMME »B ») 09H30: AMBATOBE # BAD TEAM Alarobia (senior HOMME »B ») 11H: CHALLENGER # TMB2A (U16.... (« Fety de baskety » – Hamaramparana ny fifanin- tsanana ny eny Andraisoro)
Auguste (nitranga in-1) : “Miezaka ny manodina mpilalao izahay mba hahafahana mandrindra tsara ny lalao, izay mbola hatrehinay amin'ity volana febroary ity”, hoy i Raux Auguste, mpanazatra ny AS Adema raha miresaka ny fifaninanana “Grand tournoi de Tana”. (Kitra « Grand tournoi de Tana » – Hiady Ar 2 tapitrisa ny AS Adema sy Cnaps Sport)
Tfma (nitranga in-1) : Ny Tam dia nandavo ny Tfma, izay ekipa lefitry ny tompondakan'i Mada gasikara tamin'ny taon-dasa, teo amin'ny manasa-dalana tamin'ny alalan'ny isa tery dia tery 15 no ho 14. (Rugby Amboaran’ny filoha – Lalaon’ny samy goavana ny an’ny 3FB sy Tam Anosibe)
Tampotampoka (nitranga in-1) : Tampotampoka ihany ny fanapahan-kevitry ny tompon'andraikitra izay somary naha-vaka saina ny ray aman-dreny. (Fiatoana)
niandohan' (nitranga in-1) : Ankoatra ny eny Ambohi- trabiby, izay niandohan' ny taom-baovao malagasy tamin'ny andron-dRalambo, dia handray ireo hetsika rehetra amin'ity taona ity ihany koa ny kianjan' Andohalo. (Fomba amam-panao – Hankalazaina ny 11 sy 12 marsa ny taom-baovao malagasy)
Nilaza (nitranga in-2) : Nilaza ho mpanara-maso ireo kaontera ny tenany sady afaka mampiditra jiro amin'ny trano ihany koa. (Fanararaotana – Zary lasa fitondra misoloky ny anaran’ny Jirama)
ampahatsiahivina (nitranga in-1) : Mbola mila ampahatsiahivina ve hoy aho ilay niseho teny Ambohidahy e! Sa aleo ihany tratrarin'ny latsa aoriana ao. (Tsisy mihaino, mody tsy mahita)
Antsiranana (nitranga in-1) : tapaka efa ho telo andro izao, ny ranon'ny Jirama ao Antsiranana. (Famatsiana rano – Telo andro nisotroana orana ny mponin’Antsiranana)
voaafina (nitranga in-1) : Mampiseho ango-kevitra an-tsarintany ao amin'ny Google i Korea Avaratra — midika ve izany fa efa voaafina ambanin'ny tany avokoa ny zava-mifandraika amin'ny ara-tafika rehetra. (Google Mamoaka Ny Sarintanin'i Korea Avaratra Hifandrimbonana)
국가보안법 (nitranga in-1) : 근데 혹 이거 들여다보다가 국가보안법 걸리는 건 아닌가. (Google Mamoaka Ny Sarintanin'i Korea Avaratra Hifandrimbonana)
nahiana (nitranga in-1) : tsy araka izay nahiana fa tsy dia nahitana rotsak'orana nanao ahoana loatra teto an-drenivohitra vokatr'ilay rivo-doza Felleng. (Fiatoana)
Emmanuel (nitranga in-1) : Notsipihin'i Emmanuel Rakotovahiny, mpanolotsainan'ny Praimi- nisitra fa «tsy tokony hisy ny fanaovana tery vay manta amin'ny fandinihana na fandaniana io volavolan-dalàna io ary tsy anjaran' ny Filohan'ny tetezamita irery no mandidy sy mana- paka ny momba izany». (Disadisa amin-dRajoelina – Niaro an’i Beriziky Rakotovahiny sy i Voninahitsy)
nitsidihan' (nitranga in-1) : Tamin'ny 29 Jan 2013 no namoahan'i Google ny sarintanin'i Korea Avaratra nifandrimbonana, telo herinandro monja nitsidihan'ny tale jeneralin'ny Google, Eric Schmidt, tao amin'ny firenena. (Google Mamoaka Ny Sarintanin'i Korea Avaratra Hifandrimbonana)
tapakila (nitranga in-1) : Miara-miasa amina tranombarotra maro ihany koa ny orinasa, ka ankoatra ny asa fian- tsenana dia manao iraka hafa toy ny fandoavana ny faktioran'ny Jirama, ny fanaovana volo any an-tokantrano, ny fizarana tapakila sy fivarotana kapila mangirana ho an'ireo mpikarakara lanonana sy rindran-kira izy. (Fanjifana – Efa iainana eto ny fiantsoana orinasa manokana hiantsena sy irakirahina)
aleo (nitranga in-2) : Mbola mila ampahatsiahivina ve hoy aho ilay niseho teny Ambohidahy e! Sa aleo ihany tratrarin'ny latsa aoriana ao. (Krizy miverimberina – Niadian-kevitra teny Tsara-lalàna ny fototry ny olana)
tratry (nitranga in-1) : « Rehefa vanim-potoana toy izao dia tratry ny faha- tapahan-drano foana izahay. (Famatsiana rano – Telo andro nisotroana orana ny mponin’Antsiranana)
Rasoanaivo (nitranga in-1) : Mandritra io fifaninanana io rahateo no hahafahan-dry Titi Rasoanaivo, mpanazatra ny Cnaps Sport, mifantina tsara ireo mpilalao 25 takian'ny federasiona ho an'ireo ekipa milalao eo amin'ny diviziona voalohany, mandrindra ny taom-pilalaovana. (Kitra « Grand tournoi de Tana » – Hiady Ar 2 tapitrisa ny AS Adema sy Cnaps Sport)
Sport (nitranga in-4) : tsy hanao an-kambo ny Cnaps Sport (manga)
nitondrana (nitranga in-1) : Voa- tery nitady fiara manokana izahay nitondrana ireo voa- fonja hiatrika fitsarana eny amin'ny Tribonaly. (Fandriampahalemana – Entina amin’ny taksibe ireo voafonja hotsaraina)
ampiasay (nitranga in-1) : ramambason Andrialaza, mametaka ny fitaovana mamokatra hydrôzena hanampiana solika ampiasain'ity môtô ity
Alzeriana (nitranga in-1) : LEO
nahavita (nitranga in-2) : tsy hanao an-kambo ny Cnaps Sport (manga)
Samy nahavita fandre- sena roa avy, saingy miavaka eo amin'ny elanelan'ny baolina tafiditra sy niditra tao amin'ny tena ny AS Adema raha miohatra amin'ny Cnaps Sport. (Rugby Amboaran’ny filoha – Lalaon’ny samy goavana ny an’ny 3FB sy Tam Anosibe)
manjò (nitranga in-2) : Asehoy ny firaisankinanao amin'ireo ankizy ao Syria amin'ny alalan'ny:
Fanehoana ny fiahianao amin'ny fizarana ity lahatsoratra ity izay maro ireo fomba ahafahana miaro ireo ankizy Syriana manoloana ny anjara ratsy manjò azy ireo. (Krizin'ny Ankizy Ao Syria: Ahoana Ny Fomba Hanampianao)
Mampikony (nitranga in-1) : Navoakan'ny tatitry ny Birao nasionaly misahana ny fitantanana ny loza voajanahary (Bngrc) omaly, fa olona efatra indray no tsy hita popoka, iray tany Mananara Avaratra, iray tany Midongy Atsimo, roa tany Mampikony. (Rivo-doza felleng – Olona efatra indray no tsy hita popoka)
Joseph (nitranga in-1) : Boky roa nosoratan' i Jean Joseph Rabearivelo no nohavaozin'ny Bank Of Afrika ny fanontana azy, ka natolotr'izy ireo ny tranombokim-pirenena etsy Anosy omaly : «Traduit de la nuit na Nadika tamin'ny alina» sy ny «Tananarive ses rues, ses quartiers». (Literatiora – Nivoaka ny boky roa an- dRabearivelo nohavaozina)
Entona (nitranga in-1) : Entona matanjaka be anefa izy io ka mila fahaizana ny mikirakira azy. (Fitsitsiana angovo – Efa misy mampiofana ny fampandehanana ny fiara amin’ny rano)
nitondra (nitranga in-2) : Nisy tamin'izy ireo no nitondra basy saingy antsy no voalaza fa teny an-tanan'ny ankamaroany. (Krizy miverimberina – Niadian-kevitra teny Tsara-lalàna ny fototry ny olana)
Rakotovahiny (nitranga in-1) : Notsipihin'i Emmanuel Rakotovahiny, mpanolotsainan'ny Praimi- nisitra fa «tsy tokony hisy ny fanaovana tery vay manta amin'ny fandinihana na fandaniana io volavolan-dalàna io ary tsy anjaran' ny Filohan'ny tetezamita irery no mandidy sy mana- paka ny momba izany». (Disadisa amin-dRajoelina – Niaro an’i Beriziky Rakotovahiny sy i Voninahitsy)
ligy (nitranga in-1) : Miendrika lalao famaranana ho an'ny “Grand Tournoi de la ville d'Antananarivo” andiany voalohany, karakarain' ny ligin'Analamanga sy ny kaominina Antananarivo renivohitra ny fihaonana farany eo amin'izy ireo, etsy amin'ny kianjaben'i Mahamasina, rahampitso. (Kitra « Grand tournoi de Tana » – Hiady Ar 2 tapitrisa ny AS Adema sy Cnaps Sport)
lalànan' (nitranga in-1) : Mety ho voampanga ho manitsakitsaka ny lalànan'ny fiarovam-pirenena ve aho noho ny fijereko io sarintany io fotsiny. (Google Mamoaka Ny Sarintanin'i Korea Avaratra Hifandrimbonana)
ramambason (nitranga in-1) : ramambason Andrialaza, mametaka ny fitaovana mamokatra hydrôzena hanampiana solika ampiasain'ity môtô ity
fangaraharahan' (nitranga in-1) : TAN-TSOROKA> Nana-mafy ny fahavononany hiantoka ny fangaraharahan'ny fifidianana koa ny minisitera misahana ny fampifandraisana ireo andrim-panjakan'ny tete-zamita. (Sombiny)
Protect (nitranga in-1) : Avaaz: Protect Syria's Children Now (Arovy ny Ankizy ao Syria Ankehitriny). (Krizin'ny Ankizy Ao Syria: Ahoana Ny Fomba Hanampianao)
Zon' (nitranga in-1) : Vavahadin-tseraseran'ny Zon'ny Ankizy nitatitra hoe:
Ankizy Syriana ao anaty Krizy, manampy ny fahoriana ny ririnina mamirifiry. (Krizin'ny Ankizy Ao Syria: Ahoana Ny Fomba Hanampianao)
nuit (nitranga in-1) : Boky roa nosoratan' i Jean Joseph Rabearivelo no nohavaozin'ny Bank Of Afrika ny fanontana azy, ka natolotr'izy ireo ny tranombokim-pirenena etsy Anosy omaly : «Traduit de la nuit na Nadika tamin'ny alina» sy ny «Tananarive ses rues, ses quartiers». (Literatiora – Nivoaka ny boky roa an- dRabearivelo nohavaozina)
tsentsy (nitranga in-1) : Ny fantsona tsentsin'ny fako hatrany no fanazavana omena anay isan-taona », hoy izy ireo. (Famatsiana rano – Telo andro nisotroana orana ny mponin’Antsiranana)
hialana (nitranga in-1) : “Tsy maintsy nohamafisina ny fiambenana, nampitomboina ny isan'ny mpandraharahan' ny fonja nanaraka azy ireo, mba hialana amin'izay resaka fitsoahana izay », hoy hatrany Rajernerson Aubin. (Fandriampahalemana – Entina amin’ny taksibe ireo voafonja hotsaraina)
tenany (nitranga in-2) : Nilaza ho mpanara-maso ireo kaontera ny tenany sady afaka mampiditra jiro amin'ny trano ihany koa. (Fanararaotana – Zary lasa fitondra misoloky ny anaran’ny Jirama)
elina (nitranga in-1) : Tsy ny olon'ny ankolafy Rajo- elina na Ravalomanana na Zafy na Ratsiraka irery no mety hiharan'ny lozam-pifamoivoizana vokatry ny haratsian'ireo fiara efa tsy tokony hiasa intsony. (Tsisy mihaino, mody tsy mahita)
الإغاثة (nitranga in-1) : Fiarahamonina ao amin'ny faritra izay manampy ireo ankizy Syriana:
tournoy (nitranga in-1) : “Miezaka ny manodina mpilalao izahay mba hahafahana mandrindra tsara ny lalao, izay mbola hatrehinay amin'ity volana febroary ity”, hoy i Raux Auguste, mpanazatra ny AS Adema raha miresaka ny fifaninanana “Grand tournoi de Tana”. (Kitra « Grand tournoi de Tana » – Hiady Ar 2 tapitrisa ny AS Adema sy Cnaps Sport)
nahita (nitranga in-8) : Nanom-boka teo ny disadisa teo aminay samy mpanafika satria samy nilaza ho tsy nisy nahita an'io vola io », hoy izy ireo tamin'ny mpanao famotorana. (Tapatapany)
erantany (nitranga in-1) : ireo ankizy, tsy afa-mitombo ao anatin'ny tonolon'ny fifampitokisana, dia tsy maintsy miatrika habibiana dieny mbola ao anatin'ny fahazazana tanteraka, matetika manamasaka ao anatiny ao fa fomba iray tahaka ny hafa hamahana ireo disadisa ny herisetra, ka sarotra ho azy ireo ny handefa hafatra ho amin'ny fandriampahalemana sy ny fiarovana erantany ho an'ny taranaka hoavy
tanàna (nitranga in-1) : Baudin kosa ny «Tananarive, ses rues, ses quartiers», manazava sy mitantara ireo anarana tanàna sy toerana samihafa eto Madagasikara. (Literatiora – Nivoaka ny boky roa an- dRabearivelo nohavaozina)
Andraisoro (nitranga in-2) : Barphil Andriantsiferanarivo Fandaharan-dalao Sabotsy 2 febroary : 08H: BAD TEAM Alarobia # BFT Ivato (senior DAME) 09H30: BEMIRAY # DREAM TEAM (senior HOMME »A ») 11H: MADASPORT # BAD TEAM Alarobia (senior HOMME »B ») 13H00: TMB2A Ambohimirary # BCS Soamanandrariny (U20 Garcon) 14H00: BCS Soamanandrariny # JSM Ambohipo (senior HOMME »B ») Alahady 3 febroary: 08H: JBC Betongolo # AMBATOBE (senior HOMME »B ») 09H30: AMBATOBE # BAD TEAM Alarobia (senior HOMME »B ») 11H: CHALLENGER # TMB2A (U16.... (« Fety de baskety » – Hamaramparana ny fifanin- tsanana ny eny Andraisoro)
Cenit (nitranga in-1) : Ity minisitera ity izay milaza ny hanampy betsaka ny Cenit amin' ny fanentanana ny olona amin'ny fifidianana sy hitondra ny anjara biri-kiny amin'ny fanome-zana toromarika ny mpifidy amin'ny fiatrehana izay fifidianana izay. (Sombiny)
hampihodinana (nitranga in-1) : Milaza anefa ny Gpm fa mbola tsy mazava amin' izy ireo hatreto ny loharano hakana ny vola hampihodinana io tahiry io. (Fandraharahana – Antomotra ny fivoriana momba ny fihetsehan’ny vidin-tsolika)
Eric (nitranga in-1) : Tamin'ny 29 Jan 2013 no namoahan'i Google ny sarintanin'i Korea Avaratra nifandrimbonana, telo herinandro monja nitsidihan'ny tale jeneralin'ny Google, Eric Schmidt, tao amin'ny firenena. (Google Mamoaka Ny Sarintanin'i Korea Avaratra Hifandrimbonana)
1000 (nitranga in-1) : « Ar 1000 ny amin'ny halaviran-dalana latsaky ny 6km ho an'ny entana tsy mihoatra ny 15kg. (Fanjifana – Efa iainana eto ny fiantsoana orinasa manokana hiantsena sy irakirahina)
Ambatomaro (nitranga in-1) : Nilaza izy fa dimy volana izay no nanaovany ity asa fisolokiana ity ary teny Alakamisy Fenoarivo sy Ambatomaro no nanaovany izany teo aloha », hoy ny loharanom-baovao avy amin'ny zandary any Arivonimamo, izay nanao ny famotorana. (Fanararaotana – Zary lasa fitondra misoloky ny anaran’ny Jirama)
España (nitranga in-1) : Sary: UNICEF España on Twitter. (Krizin'ny Ankizy Ao Syria: Ahoana Ny Fomba Hanampianao)
amparakatsakatsaka (nitranga in-1) : afaka mitsangatsangana manerana ny tany ianao amin'ny alalan'ny klikin'ny totozy ao amin'ny Google Maps; mijery ny amparakatsakatsaka eto an-tany, eny fa na dia ny manavatsava an'i Antartika miaraka amin'ny andian-tsary afa-mihodidina aza. (Google Mamoaka Ny Sarintanin'i Korea Avaratra Hifandrimbonana)
Rasendrahasina (nitranga in-2) : namboraka tamin'ny mpanao famotorana ny zava-nitranga teny Ambatoroka, ny marainan'ny 16 janoary ireo efa-dahy voalaza fa nanafika ny mpitandrina Rasendrahasina Lala. (Betroka – Latsa-nenina ireo voatondro ho nanafika ny pasitera Rasendrahasina)
Maps (nitranga in-3) : Saingy misy toerana iray tsy ahatafidirana matetika, na dia amin'ny alalan'ny Google Maps aza, dia ilay fanjakana mitoka-monina: Korea Avaratra. (Google Mamoaka Ny Sarintanin'i Korea Avaratra Hifandrimbonana)
Lalànan' (nitranga in-1) : @leftliber moa lasa be ahiahy tafahoatra [ko] momba ilay lalàna hafa, ilay Lalànan'ny Fiarovam-Pirenena izay manivana izay rehetra misy ifandraisany amin'i Korea Avaratra ka nampigadra ilay Twittere Koreana Tatsimo noho izy nampita sioka koreana tavaratra:
fahampian' (nitranga in-1) : “Tsy fahampian'ny fitaovana no tsy maintsy handraisana izany fepetra izany. (Fandriampahalemana – Entina amin’ny taksibe ireo voafonja hotsaraina)
Nikasa (nitranga in-1) : « Nikasa hanao fanafihana teny Itaosy ny iray tamin'ireo jiolahy no voa- sambotra. (Betroka – Latsa-nenina ireo voatondro ho nanafika ny pasitera Rasendrahasina)
delicious (nitranga in-2) : Mpanoratra Rami Alhames · Nandika Mamisoa
lohalaharana (nitranga in-1) : Henjankenjana ny miandry azy ireo amin'ity, satria ny Tam Anosibe, izay havanana amin'ny lalaon'ireo lohalaharana no hifanandrina aminy eo amin'ny famaranana. (Rugby Amboaran’ny filoha – Lalaon’ny samy goavana ny an’ny 3FB sy Tam Anosibe)
tato (nitranga in-1) : “Tratran'ny fahasamponana tampoka ireo fiara lehibe roa tato aminay, raha handeha hanainga ny maraina. (Fandriampahalemana – Entina amin’ny taksibe ireo voafonja hotsaraina)
hampiasaina (nitranga in-1) : Ny fahefana miaramila indray dia tokony hampiasaina ho fiarovana ny vahoaka fa tsy sanatria hanaovana herim-pamoretana. (Krizy miverimberina – Niadian-kevitra teny Tsara-lalàna ny fototry ny olana)
nandroso (nitranga in-1) : Ity no hetsika nandroso haingana nokarakarainay, an'arivony ireo olona misoratra anarana amin'izany isan'andro. (Krizin'ny Ankizy Ao Syria: Ahoana Ny Fomba Hanampianao)
Raux (nitranga in-1) : “Miezaka ny manodina mpilalao izahay mba hahafahana mandrindra tsara ny lalao, izay mbola hatrehinay amin'ity volana febroary ity”, hoy i Raux Auguste, mpanazatra ny AS Adema raha miresaka ny fifaninanana “Grand tournoi de Tana”. (Kitra « Grand tournoi de Tana » – Hiady Ar 2 tapitrisa ny AS Adema sy Cnaps Sport)
탈북자들 (nitranga in-1) : @romanticity anisan'ny nanoratra [ko]:
hoavy (nitranga in-1) : ireo ankizy, tsy afa-mitombo ao anatin'ny tonolon'ny fifampitokisana, dia tsy maintsy miatrika habibiana dieny mbola ao anatin'ny fahazazana tanteraka, matetika manamasaka ao anatiny ao fa fomba iray tahaka ny hafa hamahana ireo disadisa ny herisetra, ka sarotra ho azy ireo ny handefa hafatra ho amin'ny fandriampahalemana sy ny fiarovana erantany ho an'ny taranaka hoavy
ateraky (nitranga in-2) : Aretina efa mahazatra nefa tokony hanaovana ezaka ny ateraky ny fiakaran'ny rano, indrindra taorian'ny fandalovan'ny rivo-doza Felleng farany teo. (Krizin'ny Ankizy Ao Syria: Ahoana Ny Fomba Hanampianao)
Razanamalala (nitranga in-1) : Isan'ireo tsy afaka hilalao i Elisa Mampionona Raharimalala sy Sylvie Seta Antoinette ary Sonia Razanamalala na i Lydia noho ny antony ara-pahasalamana. (Volley ball Afrika – Tsy handray anjara amin’ ny fifaninanana ny Stef’Auto)
퀄리티가 (nitranga in-1) : @romanticity anisan'ny nanoratra [ko]:
nampahafantarana (nitranga in-1) : ramambason Andrialaza, mametaka ny fitaovana mamokatra hydrôzena hanampiana solika ampiasain'ity môtô ity
électrolyse (nitranga in-1) : ramambason Andrialaza, mametaka ny fitaovana mamokatra hydrôzena hanampiana solika ampiasain'ity môtô ity
SRDH (nitranga in-1) : Fiarahamonina ao amin'ny faritra izay manampy ireo ankizy Syriana:
hofidiana (nitranga in-1) : Ny amin'ny firotsahako hofidiana amin'ny fifidianana filoha dia ho hita eo ihany izany fa aleo aloha handinika tsara », hoy izy. (Krizy miverimberina – Niadian-kevitra teny Tsara-lalàna ny fototry ny olana)
tondraky (nitranga in-1) : Ankoatra ireo olona tsy hita popoka ireo izany dia miisa dimy hatramin'izao ny olona namoy ny ainy, 946 ny tra-boina, 184 ny olona tsy manan-kialofana, 241 ny trano tondraky ny rano, efatra ny trano nisy fahasimbana, dimy ny trano tena potika, tetezana iray sy lalana any amin'ny kaominina Tanambao Mahatsara, distrikan'i Vatomandry no tapaka. (Rivo-doza felleng – Olona efatra indray no tsy hita popoka)
fifanintsanana (nitranga in-1) : andro fifanintsanana faha-15 sy faha-16, ny sabotsy 2 sy alahady 3 febroary izao, eny amin'ny « fety de basket » eny amin'ny kianjan'Andraisoro. (« Fety de baskety » – Hamaramparana ny fifanin- tsanana ny eny Andraisoro)
fahampiana (nitranga in-1) : Ny tsy fahampiana isa eo amin'ireo mpilalao handrafitra izany ekipa izany no antony voalohany tsy handraisan'ny Stef'Auto anjara. (Volley ball Afrika – Tsy handray anjara amin’ ny fifaninanana ny Stef’Auto)
Analamahintsy (nitranga in-1) : tEAM Analamahintsy (senior HOMME »B »). (« Fety de baskety » – Hamaramparana ny fifanin- tsanana ny eny Andraisoro)
Omer (nitranga in-1) : nipoitra ihany koa ireo mpomba an'i Jean Omer Beriziky, taorian'ilay Filan-kevitry ny minisitra niteraka resabe ary nampiseho niha- rihary indray ny tsy fitovi-an-kevitra eo amin'ny Filohan'ny tetezamita sy ny Praiminisitra amin'izay mahakasika ny fandinihana ireo volavolan-dalàna momba ny raharaham-pifidianana. (Disadisa amin-dRajoelina – Niaro an’i Beriziky Rakotovahiny sy i Voninahitsy)
والتنمية (nitranga in-1) : Fiarahamonina ao amin'ny faritra izay manampy ireo ankizy Syriana:
Ambatondrazaka (nitranga in-1) : Mbola nanolotra fandriana miisa 288 ho an'ny CHRR Ambatondrazaka sy ireo ivon-toeram-paha- salamana ao Moramanga ihany koa Ambatovy. (Tapatapany)
hirongatra (nitranga in-1) : nametrahana toeram-pitsaboana ireo tra-boina
Mitady hirongatra. (Valanaretina – Nametrahana toeram-pitsaboana eny akaikin’ ireo tra-boina)
tsenana (nitranga in-1) : Miara-miasa amina tranombarotra maro ihany koa ny orinasa, ka ankoatra ny asa fian- tsenana dia manao iraka hafa toy ny fandoavana ny faktioran'ny Jirama, ny fanaovana volo any an-tokantrano, ny fizarana tapakila sy fivarotana kapila mangirana ho an'ireo mpikarakara lanonana sy rindran-kira izy. (Fanjifana – Efa iainana eto ny fiantsoana orinasa manokana hiantsena sy irakirahina)
Fenoarivo (nitranga in-1) : Nilaza izy fa dimy volana izay no nanaovany ity asa fisolokiana ity ary teny Alakamisy Fenoarivo sy Ambatomaro no nanaovany izany teo aloha », hoy ny loharanom-baovao avy amin'ny zandary any Arivonimamo, izay nanao ny famotorana. (Fanararaotana – Zary lasa fitondra misoloky ny anaran’ny Jirama)
Association (nitranga in-1) : Fiarahamonina ao amin'ny faritra izay manampy ireo ankizy Syriana:
pasitera (nitranga in-3) : Toa latsa-nenina ihany izy ireo rehefa nahalala tamin' ny gazety ny ampitson'ilay fanafihana fa pasitera ilay voatafika. (Betroka – Latsa-nenina ireo voatondro ho nanafika ny pasitera Rasendrahasina)
별로였는데 (nitranga in-1) : @romanticity anisan'ny nanoratra [ko]:
Elisa (nitranga in-1) : Isan'ireo tsy afaka hilalao i Elisa Mampionona Raharimalala sy Sylvie Seta Antoinette ary Sonia Razanamalala na i Lydia noho ny antony ara-pahasalamana. (Volley ball Afrika – Tsy handray anjara amin’ ny fifaninanana ny Stef’Auto)
hafantarana (nitranga in-1) : Ho an'ny etsy amin' ny kianjan'Andohalo dia fivoarana entin'ny taom-baovao malagasy ny fampa- hafantarana ny rehetra amin'ny alalan'ny vela-tseho ireo fomba amam-panao malagasy toy ny famadihana, famorana, fanorenana fanambadiana…
Ho hita ao anatin'izany koa ireo karazan-javamaniry fanao fanafody misy eto amintsika, ny tao trano malagasy sy ny heviny ary ny tantarany. (Fomba amam-panao – Hankalazaina ny 11 sy 12 marsa ny taom-baovao malagasy)
ahatafidirana (nitranga in-1) : Saingy misy toerana iray tsy ahatafidirana matetika, na dia amin'ny alalan'ny Google Maps aza, dia ilay fanjakana mitoka-monina: Korea Avaratra. (Google Mamoaka Ny Sarintanin'i Korea Avaratra Hifandrimbonana)
tEAM (nitranga in-1) : tEAM Analamahintsy (senior HOMME »B »). (« Fety de baskety » – Hamaramparana ny fifanin- tsanana ny eny Andraisoro)
nampitana (nitranga in-1) : Ny fanatanjahantena no endrika nampitana ny hafatra mahakasika izany, ka nanentanana olona 3 000 teo ho eo. (Tapatapany)
nosoratan' (nitranga in-1) : Boky roa nosoratan' i Jean Joseph Rabearivelo no nohavaozin'ny Bank Of Afrika ny fanontana azy, ka natolotr'izy ireo ny tranombokim-pirenena etsy Anosy omaly : «Traduit de la nuit na Nadika tamin'ny alina» sy ny «Tananarive ses rues, ses quartiers». (Literatiora – Nivoaka ny boky roa an- dRabearivelo nohavaozina)
naiditra (nitranga in-1) : Nato-lotra ny Fampanoavana omaly izy ireo ka izao naiditra am-ponja vonjimaika izao miandry ny fitsa- rana azy. (Tapatapany)
الإنسانية (nitranga in-1) : Fiarahamonina ao amin'ny faritra izay manampy ireo ankizy Syriana:
Anosibe (nitranga in-2) : ekipa samy mitana ny lohany eo amin'ireo sokajy misy eto Mada- gasikara ny 3FB sy ny Tam Anosibe, raha ny fiadiana ny amboaran'ny Filoha, no hitsarana azy ireo. (Rugby Amboaran’ny filoha – Lalaon’ny samy goavana ny an’ny 3FB sy Tam Anosibe)
tale (nitranga in-6) : ny alin'ny alakamisy teo no nisy nanafika ny tale misahana ny raharaha mahakasika ny lalàna eo anivon'ny minisiteran'ny Mponina, teny Androndra. (Google Mamoaka Ny Sarintanin'i Korea Avaratra Hifandrimbonana)
notontosaina (nitranga in-2) : BE SAHALA
Saika ady sahala avokoa ny 13 tamin'ireo lalao 24 notontosaina tamin'ny fihodinana voalohany ho an'ny Can 2013. (Anjoron- »CAN »)
Instapaper (nitranga in-2) : Mpanoratra Rami Alhames · Nandika Mamisoa
irakiraka (nitranga in-2) : efa misy ireo orinasa manao tolotra momba ny asa irakiraka hatrany Toamasina
Manamora ny fiainana ho an'ireo tsy manam-potoana. (Fanjifana – Efa iainana eto ny fiantsoana orinasa manokana hiantsena sy irakirahina)
hitondra (nitranga in-2) : Ity minisitera ity izay milaza ny hanampy betsaka ny Cenit amin' ny fanentanana ny olona amin'ny fifidianana sy hitondra ny anjara biri-kiny amin'ny fanome-zana toromarika ny mpifidy amin'ny fiatrehana izay fifidianana izay. (Google Mamoaka Ny Sarintanin'i Korea Avaratra Hifandrimbonana)
nofefena (nitranga in-1) : Efa misy faritra nofefena toy izany ao amin' ny Agronomie,ka mpianatra ihany no afaka mandeha amin'izany”, hoy indray Rasoarahona Jean, talen' ny sampam-pianarana Agronomie. (Ankatso – Misy adala mampatahotra mirenireny)
nisambotra (nitranga in-1) : Izy avy eo no nanondro ireo namany nanafika teny Ambatoroka, ka nahafahana nisambotra ireo telo hafa. (Betroka – Latsa-nenina ireo voatondro ho nanafika ny pasitera Rasendrahasina)
misolo (nitranga in-1) : Matetika mantsy io tale io miseho amin'ireny hetsika misy ady tany ireny misolo tena ny minisiteran' ny Mponina. (Fanafihana hafahafa – Talena minisitera nisy nanindrona antsy tao an-tranony)
Bank (nitranga in-1) : Boky roa nosoratan' i Jean Joseph Rabearivelo no nohavaozin'ny Bank Of Afrika ny fanontana azy, ka natolotr'izy ireo ny tranombokim-pirenena etsy Anosy omaly : «Traduit de la nuit na Nadika tamin'ny alina» sy ny «Tananarive ses rues, ses quartiers». (Literatiora – Nivoaka ny boky roa an- dRabearivelo nohavaozina)
hikaroka (nitranga in-1) : Mino anefa izahay fa hanao ny asany ny mpitandro ny filaminana hikaroka ny nahavanon-doza », hoy ny loharanom-baovao avy amin'ny fianakavian'ilay niharam- boina. (Fanafihana hafahafa – Talena minisitera nisy nanindrona antsy tao an-tranony)
iseraseran' (nitranga in-1) : Toerana iseraseran'ny tanora sy anovozany fahalalana, manan-danja ho an'ny fampivelarana azy ireo ny tranon'ny tanora, anisan'ireo tetikasan' ny minisiteran'ny Tanora sy ny ala voly. (Tapatapany)
hanohitra (nitranga in-1) : Matetika ny tompon'andraikitra dia mivaona amin'ny fanapahan-keviny, ka mahatonga ny olona hanohitra izany. (Krizy miverimberina – Niadian-kevitra teny Tsara-lalàna ny fototry ny olana)
Google (nitranga in-14) : afaka mitsangatsangana manerana ny tany ianao amin'ny alalan'ny klikin'ny totozy ao amin'ny Google Maps; mijery ny amparakatsakatsaka eto an-tany, eny fa na dia ny manavatsava an'i Antartika miaraka amin'ny andian-tsary afa-mihodidina aza. (Google Mamoaka Ny Sarintanin'i Korea Avaratra Hifandrimbonana)
구글지도 (nitranga in-1) : @romanticity anisan'ny nanoratra [ko]:
Julien (nitranga in-1) : «Afaka 10 na 15 andro eo ho eo fara fahafantarany dia hanolotra izay anarana kandidà izay amintsika ny Filohan'ny tetezamita», araka ny nomarihin'ny Filoha mpitarika ny Udr-Fanovana, Reboza Julien teny an-toerana, nandritra ny fihaonany tamin'ireo mpanao politika miara-dia aminy ao anatin'ity vondrona politika akaiky ny Filohan'ny tetezamita ity. (Fanolorana kandida – Nanome fahalalahana tanteraka an-dRajoelina ny Udr-Fanovana)
niha (nitranga in-1) : Mihena miandalana kosa ny herin'io rivo-doza io ary efa niha nanalavitra ny morontsiraka atsinanan' ny Nosy izy. (Rivo-doza felleng – Olona efatra indray no tsy hita popoka)
handinihana (nitranga in-1) : alain Soumoudronga, sekretera jeneralin'ny Gpm
Naiditra (nitranga in-2) : Naiditra am-ponja vonjimaika eny amin'ny fonjan' Antanimora ireo telo lahy voatondro fa mpangalatra entana anaty fiara tra-tehaky ny polisy tetsy Andrefan'Ambohijana-hary, afak'omaly. (Tapatapany)
Nentany (nitranga in-1) : hARENA AN-KIBON' NY TANY
Nentanin'Ambatovy sy ny Tranon'ny tanora ao Moramanga mahakasika ny fananahana ireo tanora ao an-toerana. (Tapatapany)
nifampitsinjara (nitranga in-1) : LALAO VINTANA
Rise (nitranga in-2) : Fizarana ny hetsika amin'ny alalan'ny Rise 4 humanity izay:
nankalaza (nitranga in-1) : nIVOAKA ALINA
monisipaly (nitranga in-1) : Mora miparitaka ny aretina noho ny fahamaroan'ny olona miara-monina”, hoy Ramamialisoa Sariaka, mpiasa sosialy avy amin'ny Birao monisipaly misahana ny fahadiovana (Bmh). (Valanaretina – Nametrahana toeram-pitsaboana eny akaikin’ ireo tra-boina)
soratry (nitranga in-1) : Mampiavaka ity boky faharoa ity tamin'ny teo aloha ny fahitana ireo soratry ny mpanoratra tamin'ny fandikan-teny nataony. (Literatiora – Nivoaka ny boky roa an- dRabearivelo nohavaozina)
Colbert (nitranga in-1) : mISALASALA > Tsy mbola nanambara ny mety ho fisiana fanapahan-kevitra hentitra momba ny fampodiana ny Filoha teo aloha, Marc Ravalomanana ny iraky ny vondrona Sadc, Leonardo Simao, raha nitafa fohy tamin'ny mpanao gazety, tetsy amin'ny Hotel Colbert, omaly. (Sombiny)
Research (nitranga in-1) : Sary: Global Research
Rasoloarison (nitranga in-1) : Monica Rasoloarison. (Fanjifana – Efa iainana eto ny fiantsoana orinasa manokana hiantsena sy irakirahina)
nofaina (nitranga in-1) : Tsy vita ny maraina ny fanamboarana ireo fiara ireo, ka tsy maintsy nampiasaina hatramin'ny hariva io fiara nofaina io”, hoy ny fanazavana avy amin-dRajernerson Aubin, talen'ny fonjan'Antanimora. (Fandriampahalemana – Entina amin’ny taksibe ireo voafonja hotsaraina)
resen' (nitranga in-1) : Sao ho mora voalemy sy resen'ny antsoantson'ny sasany hoe io indray fa « manao tsindrio fa lavo » sy ny « tsindrihazolena » ary ny fanenjehana foana ny « madinika ». (Tsisy mihaino, mody tsy mahita)
السورية (nitranga in-1) : Fiarahamonina ao amin'ny faritra izay manampy ireo ankizy Syriana:
hiharan' (nitranga in-1) : Tsy ny olon'ny ankolafy Rajo- elina na Ravalomanana na Zafy na Ratsiraka irery no mety hiharan'ny lozam-pifamoivoizana vokatry ny haratsian'ireo fiara efa tsy tokony hiasa intsony. (Tsisy mihaino, mody tsy mahita)
ahafahana (nitranga in-2) : Tokony hiezaka hamaha haingana ny olana ny minisitera tompon'andrai- kitra, satria hafa mihitsy ny teknika ahafahana miaro ireo voafonja amin'ireo fiara natokana ho amin'izany. (Krizin'ny Ankizy Ao Syria: Ahoana Ny Fomba Hanampianao)
takian' (nitranga in-1) : Mandritra io fifaninanana io rahateo no hahafahan-dry Titi Rasoanaivo, mpanazatra ny Cnaps Sport, mifantina tsara ireo mpilalao 25 takian'ny federasiona ho an'ireo ekipa milalao eo amin'ny diviziona voalohany, mandrindra ny taom-pilalaovana. (Kitra « Grand tournoi de Tana » – Hiady Ar 2 tapitrisa ny AS Adema sy Cnaps Sport)
Primeiro (nitranga in-1) : Ho an'ny AS Adema dia efa fanomanana sahady ireo mpilalao hiatrika an'i Primeiro de Agosto avy any Angola, eo amin'ny fihodinana voalohany ho an'ny fiadiana ny amboaran'i Afrika izany, ny sabotsy 16 febroary 2013 ao amin'ny kianja 11 novambra ao Luanda. (Kitra « Grand tournoi de Tana » – Hiady Ar 2 tapitrisa ny AS Adema sy Cnaps Sport)
Aretina (nitranga in-1) : Aretina efa mahazatra nefa tokony hanaovana ezaka ny ateraky ny fiakaran'ny rano, indrindra taorian'ny fandalovan'ny rivo-doza Felleng farany teo. (Valanaretina – Nametrahana toeram-pitsaboana eny akaikin’ ireo tra-boina)
navelan' (nitranga in-1) : miampy ihany ny takaitra navelan'ny rivo-doza Felleng. (Rivo-doza felleng – Olona efatra indray no tsy hita popoka)
hanamarika (nitranga in-1) : «Hanana ny fanamarihany izany taom- baovao izany koa anefa ireo vohitra samihafa manerana ny Nosy ary hisy ihany koa ireo Malagasy any andafin' ny riaka no hanamarika izany», hoy Randrianjatovo Henri, filohan'ny Trano kolotoraly Malagasy. (Fomba amam-panao – Hankalazaina ny 11 sy 12 marsa ny taom-baovao malagasy)
Koreana (nitranga in-3) : Sarintanin'ny Google ahitana ny renivohitra Koreana Tavaratra voahitsy. (Google Mamoaka Ny Sarintanin'i Korea Avaratra Hifandrimbonana)
kevitra (nitranga in-1) : “ Efa nanao antso avo tany amin'ireo klioba hafa izahay mba hanampy anay saingy tsy nisy nanoina ka dia nanapa- kevitra izahay fa tsy handray anjara”, hoy i Stéphane Ah Waye, filohan'ny klioba Stef'Auto, solontena malagasy miaraka amin'ny Vbcd hifaninana eo amin'io fiadiana ny amboaran'i Afrika io. (Volley ball Afrika – Tsy handray anjara amin’ ny fifaninanana ny Stef’Auto)
Mysore (nitranga in-1) : Nanoratra ny fisantarana andraikitra tao amin'ny bilaogy ofisialin'ny Google Maps i Jayanth Mysore, mpitarika ny tetikasa Taon-tsarintany Google. (Google Mamoaka Ny Sarintanin'i Korea Avaratra Hifandrimbonana)
2012 (nitranga in-2) : « Mpiofana 150 no efa noraisinay an-tanana, nanomboka ny septambra 2012 teo. (Krizin'ny Ankizy Ao Syria: Ahoana Ny Fomba Hanampianao)
tranona (nitranga in-1) : Andro vitsy lasa izay no nisy fanafihana tranona Karàna iray teny Mana-kambahiny. (Fanararaotana – Zary lasa fitondra misoloky ny anaran’ny Jirama)
Syria' (nitranga in-2) : org: Tongava manatevina ny hetsika Stop the Crimes Against Syria's Children (Atsaharo ny Heloka Atao amin'ireo Ankizy ao Syria)
nahafahana (nitranga in-1) : Izy avy eo no nanondro ireo namany nanafika teny Ambatoroka, ka nahafahana nisambotra ireo telo hafa. (Betroka – Latsa-nenina ireo voatondro ho nanafika ny pasitera Rasendrahasina)
nohamafisina (nitranga in-1) : “Tsy maintsy nohamafisina ny fiambenana, nampitomboina ny isan'ny mpandraharahan' ny fonja nanaraka azy ireo, mba hialana amin'izay resaka fitsoahana izay », hoy hatrany Rajernerson Aubin. (Fandriampahalemana – Entina amin’ny taksibe ireo voafonja hotsaraina)
Ampiharo (nitranga in-1) : Ampiharo ny lalàna fa ain'olona no lalaovina. (Tsisy mihaino, mody tsy mahita)
fahangorahanao (nitranga in-1) : Amin'ny fandraisana anjara ataonao, afaka maneho ny fahangorahanao ianao ary afaka ny manamafy ny feonao mba handraisan'ny Firenena Mikambana ny andraikiny amin'ny alalan'ny fiarovana ny zon'ireo ankizy lasibatra ao Syria. (Krizin'ny Ankizy Ao Syria: Ahoana Ny Fomba Hanampianao)
barila (nitranga in-1) : Raha ny hevitr'ity olon' ny Gpm ity dia « tokony hiakatra ny vidin-tsolika, raha ny tokony ho izy, jerena amin'ny fiakaran'ny vidin' ny barila sy ny sandan'ny vola ariary manoloana ireo vola vahiny ». (Fandraharahana – Antomotra ny fivoriana momba ny fihetsehan’ny vidin-tsolika)
한국에서는 (nitranga in-1) : Nasongadin' i @premist [ko] ny fahasamihafan'ny kalitaon'ny sarintanin'ny Korea roa tonta:
hipaka (nitranga in-1) : Mila ny fanohananao izahay mba hipaka any amin'ny tsirairay izany. (Krizin'ny Ankizy Ao Syria: Ahoana Ny Fomba Hanampianao)
elektroteknika (nitranga in-1) : Isan'ireny Ramambason Andrialaza, raim-pianakaviana nandalina ny tontolon'ny elektroteknika nandritra ny efa-taona. (Fitsitsiana angovo – Efa misy mampiofana ny fampandehanana ny fiara amin’ny rano)
UNHCR (nitranga in-1) : Fampianarana Ambony Iraisam-pirenena (Institute of International Education): Krizin'ny Fampianarana ao Syria: Ahoana no fomba hanampianao
Mizarà (nitranga in-1) : Sary: Global Research
ahafahan' (nitranga in-2) : Izay no tsy ahafahan'izy ireo miatrika io fifaninanana io na dia isika aza no hampiantrano azy ity eny amin'ny lapan'ny Fanatanjahantena. (Krizin'ny Ankizy Ao Syria: Ahoana Ny Fomba Hanampianao)
Vbcd (nitranga in-1) : “ Efa nanao antso avo tany amin'ireo klioba hafa izahay mba hanampy anay saingy tsy nisy nanoina ka dia nanapa- kevitra izahay fa tsy handray anjara”, hoy i Stéphane Ah Waye, filohan'ny klioba Stef'Auto, solontena malagasy miaraka amin'ny Vbcd hifaninana eo amin'io fiadiana ny amboaran'i Afrika io. (Volley ball Afrika – Tsy handray anjara amin’ ny fifaninanana ny Stef’Auto)
ankapobenydia (nitranga in-1) : Amin'ny ankapobeny,dia mizara vondrona efatra, misy ekipa efatra avy ny mpandray anjara. (« Fety de baskety » – Hamaramparana ny fifanin- tsanana ny eny Andraisoro)
ireto (nitranga in-1) : org: Tongava manatevina ny hetsika Stop the Crimes Against Syria's Children (Atsaharo ny Heloka Atao amin'ireo Ankizy ao Syria)
Ankorondrano (nitranga in-2) : Isan'ny ahiana amin'izany ny etsy amin'ny fokontany Ankorondrano Andranomahery sy teny Anosizato. (Valanaretina – Nametrahana toeram-pitsaboana eny akaikin’ ireo tra-boina)
Jackson (nitranga in-1) : Nampitolagaga ny famerenan'i Adebayor ny fomba fandihin'i Michael Jackson. (Anjoron- »CAN »)
TEAM (nitranga in-4) : Barphil Andriantsiferanarivo Fandaharan-dalao Sabotsy 2 febroary : 08H: BAD TEAM Alarobia # BFT Ivato (senior DAME) 09H30: BEMIRAY # DREAM TEAM (senior HOMME »A ») 11H: MADASPORT # BAD TEAM Alarobia (senior HOMME »B ») 13H00: TMB2A Ambohimirary # BCS Soamanandrariny (U20 Garcon) 14H00: BCS Soamanandrariny # JSM Ambohipo (senior HOMME »B ») Alahady 3 febroary: 08H: JBC Betongolo # AMBATOBE (senior HOMME »B ») 09H30: AMBATOBE # BAD TEAM Alarobia (senior HOMME »B ») 11H: CHALLENGER # TMB2A (U16.... (« Fety de baskety » – Hamaramparana ny fifanin- tsanana ny eny Andraisoro)
Clémencau (nitranga in-1) : Betsaka amin'ireo vehivavy ihany koa no miakatra tosi-dra”, hoy ny Dr Rakotoarinala Clémencau, lehiben'ny Csb Antanimena, teny Ankorondrano, omaly. (Valanaretina – Nametrahana toeram-pitsaboana eny akaikin’ ireo tra-boina)
nadika (nitranga in-2) : Mpanoratra Rami Alhames · Nandika Mamisoa
Tribonaly (nitranga in-1) : Voa- tery nitady fiara manokana izahay nitondrana ireo voa- fonja hiatrika fitsarana eny amin'ny Tribonaly. (Fandriampahalemana – Entina amin’ny taksibe ireo voafonja hotsaraina)
Antartika (nitranga in-1) : afaka mitsangatsangana manerana ny tany ianao amin'ny alalan'ny klikin'ny totozy ao amin'ny Google Maps; mijery ny amparakatsakatsaka eto an-tany, eny fa na dia ny manavatsava an'i Antartika miaraka amin'ny andian-tsary afa-mihodidina aza. (Google Mamoaka Ny Sarintanin'i Korea Avaratra Hifandrimbonana)
Afrika (nitranga in-4) : Ho an'ny AS Adema dia efa fanomanana sahady ireo mpilalao hiatrika an'i Primeiro de Agosto avy any Angola, eo amin'ny fihodinana voalohany ho an'ny fiadiana ny amboaran'i Afrika izany, ny sabotsy 16 febroary 2013 ao amin'ny kianja 11 novambra ao Luanda. (Literatiora – Nivoaka ny boky roa an- dRabearivelo nohavaozina)
Sazio (nitranga in-1) : Sazio izay tsy manara-dalàna e. (Tsisy mihaino, mody tsy mahita)
vondron' (nitranga in-2) : Raha ny nambaran'i Alain Soumoudronga, sekretera jeneralin'ny vondron'ireo mpandraha- raha ara-tsolika (Gpm) dia amin'ny 07 febroary ho avy izao no vinavinaina hotanterahina io fivoriana voalohany io. (Google Mamoaka Ny Sarintanin'i Korea Avaratra Hifandrimbonana)
Vahid (nitranga in-1) : LEO
misoloky (nitranga in-1) : fomba vaovao entin' ny jiolahy manao fanafihana na misoloky indray ny fisehoana ho mpiasan' ny Jirama. (Fanararaotana – Zary lasa fitondra misoloky ny anaran’ny Jirama)
Ratsiraka (nitranga in-1) : Tsy ny olon'ny ankolafy Rajo- elina na Ravalomanana na Zafy na Ratsiraka irery no mety hiharan'ny lozam-pifamoivoizana vokatry ny haratsian'ireo fiara efa tsy tokony hiasa intsony. (Tsisy mihaino, mody tsy mahita)
Homarihina (nitranga in-1) : Homarihina sy hankalazaina ny 10 ka hatramin'ny 12 marsa 2013 ny taom-baovao malagasy. (Fomba amam-panao – Hankalazaina ny 11 sy 12 marsa ny taom-baovao malagasy)
Cheminot (nitranga in-1) : Ny US Ankadifotsy anefa no hany ekipa nahavita nandresy ny UAS Cheminot, tompondakan' i Madagasikara teo amin' ny ampahefa-dalana. (Rugby Amboaran’ny filoha – Lalaon’ny samy goavana ny an’ny 3FB sy Tam Anosibe)
Rakotoson (nitranga in-1) : nitondra hevitra maro ho an'izay ho mpitondra rahampitso i Harotsilavo Rakotoson, mpahay lalàna nandritra ny famelabelaran-kevitra nataony teny amin'ny sekolim-pirenena manofana ho mpitsara sy mpiraki-draharaha eny Tsaralalàna, omaly. (Krizy miverimberina – Niadian-kevitra teny Tsara-lalàna ny fototry ny olana)
Rajernerson (nitranga in-1) : “Tsy maintsy nohamafisina ny fiambenana, nampitomboina ny isan'ny mpandraharahan' ny fonja nanaraka azy ireo, mba hialana amin'izay resaka fitsoahana izay », hoy hatrany Rajernerson Aubin. (Fandriampahalemana – Entina amin’ny taksibe ireo voafonja hotsaraina)
Nanmpalahelo (nitranga in-1) : Nanmpalahelo tokoa taloha ny kalitaon'ny sarintany Google manondro an'i Korea Avaratra, saingy efa nanome antsipirihan'ny sarintany ry zareo ankehitriny. (Google Mamoaka Ny Sarintanin'i Korea Avaratra Hifandrimbonana)
Ejypta (nitranga in-1) : Fampianarana Ambony Iraisam-pirenena (Institute of International Education): Krizin'ny Fampianarana ao Syria: Ahoana no fomba hanampianao
reddit (nitranga in-2) : Mpanoratra Rami Alhames · Nandika Mamisoa
Anosizato (nitranga in-1) : Isan'ny ahiana amin'izany ny etsy amin'ny fokontany Ankorondrano Andranomahery sy teny Anosizato. (Valanaretina – Nametrahana toeram-pitsaboana eny akaikin’ ireo tra-boina)
Against (nitranga in-1) : org: Tongava manatevina ny hetsika Stop the Crimes Against Syria's Children (Atsaharo ny Heloka Atao amin'ireo Ankizy ao Syria)
Hotontosaina (nitranga in-1) : Hotontosaina eny amin'ny lapan'ny Fanatanjahantena ny fifaninanana amin'ny
2 – 15 avrily ho avy izao. (Volley ball Afrika – Tsy handray anjara amin’ ny fifaninanana ny Stef’Auto)
ankabeazan' (nitranga in-1) : “Tratran'ny aretim-pivalanana sy kohaka ary areti- maso ny ankabeazan'ireo ankizy madinika sy ireo efa zokiolona. (Valanaretina – Nametrahana toeram-pitsaboana eny akaikin’ ireo tra-boina)
ataon' (nitranga in-1) : Antso an- tariby fotsiny no ataon' ny mpanjifa liana momba izany. (Fanjifana – Efa iainana eto ny fiantsoana orinasa manokana hiantsena sy irakirahina)
Tanambao (nitranga in-1) : Ankoatra ireo olona tsy hita popoka ireo izany dia miisa dimy hatramin'izao ny olona namoy ny ainy, 946 ny tra-boina, 184 ny olona tsy manan-kialofana, 241 ny trano tondraky ny rano, efatra ny trano nisy fahasimbana, dimy ny trano tena potika, tetezana iray sy lalana any amin'ny kaominina Tanambao Mahatsara, distrikan'i Vatomandry no tapaka. (Rivo-doza felleng – Olona efatra indray no tsy hita popoka)
karakaray (nitranga in-1) : Miendrika lalao famaranana ho an'ny “Grand Tournoi de la ville d'Antananarivo” andiany voalohany, karakarain' ny ligin'Analamanga sy ny kaominina Antananarivo renivohitra ny fihaonana farany eo amin'izy ireo, etsy amin'ny kianjaben'i Mahamasina, rahampitso. (Kitra « Grand tournoi de Tana » – Hiady Ar 2 tapitrisa ny AS Adema sy Cnaps Sport)
dokambarotry (nitranga in-1) : Ao Royaume-Uni, London, fantaro fa ao amin'ny Metro an-tanàn-dehibe, misy dokambarotry ny UNICEF mba hanohanana ny ankizy ao Syria, manomeza 5 livres). (Krizin'ny Ankizy Ao Syria: Ahoana Ny Fomba Hanampianao)
Raharimalala (nitranga in-1) : Isan'ireo tsy afaka hilalao i Elisa Mampionona Raharimalala sy Sylvie Seta Antoinette ary Sonia Razanamalala na i Lydia noho ny antony ara-pahasalamana. (Volley ball Afrika – Tsy handray anjara amin’ ny fifaninanana ny Stef’Auto)
kandidà (nitranga in-3) : nanome safidy mala-laka ny Filohan'ny tetezamita, Andry Rajoelina, hanendry izay kandidà hisolo azy hirotsaka amin' ny fifidianana Filoham-pirenena ny vondrona politika Udr-Fanovana. (Fanolorana kandida – Nanome fahalalahana tanteraka an-dRajoelina ny Udr-Fanovana)
firaisankinanao (nitranga in-1) : Asehoy ny firaisankinanao amin'ireo ankizy ao Syria amin'ny alalan'ny:
namoahana (nitranga in-2) : tany amin'ny taona 30 no namoahana ireo bokin'i JJ Rabearivelo ireo
Efa tsy nisy am-polony taona maro. (Literatiora – Nivoaka ny boky roa an- dRabearivelo nohavaozina)
mpialokaloka (nitranga in-1) : Mety ilain'ny mpandositra sy ny mpialokaloka. (Google Mamoaka Ny Sarintanin'i Korea Avaratra Hifandrimbonana)
Niarahan' (nitranga in-1) : Niarahan'i JJR tamin'i E. (Literatiora – Nivoaka ny boky roa an- dRabearivelo nohavaozina)
tranombarotra (nitranga in-1) : Miara-miasa amina tranombarotra maro ihany koa ny orinasa, ka ankoatra ny asa fian- tsenana dia manao iraka hafa toy ny fandoavana ny faktioran'ny Jirama, ny fanaovana volo any an-tokantrano, ny fizarana tapakila sy fivarotana kapila mangirana ho an'ireo mpikarakara lanonana sy rindran-kira izy. (Fanjifana – Efa iainana eto ny fiantsoana orinasa manokana hiantsena sy irakirahina)
Syrian (nitranga in-1) : Ao amin'ny Facebook: Save Syrian children
fampitsaharana (nitranga in-2) : Fizarana ny hetsika amin'ny alalan'ny Rise 4 humanity izay:
hanamaivanana (nitranga in-1) : Ity lahatsary manaraka ity, Ao anatin'ny Hatsiaka: miaritra ny ririnina ireo fianakaviana mpitsoa-ponenana Syriana, lahatsary navoakan'ny savethechildrenuk mba hampisehoana ny filàn'ny ankizy sy ny fanangonam-bola ho an'ireo ankizy mpitsoa-ponenana:
tsolika (nitranga in-1) : alain Soumoudronga, sekretera jeneralin'ny Gpm
walk (nitranga in-1) : Ao amin'ny Facebook: Save Syrian children
Nahitana (nitranga in-1) : Nahitana taratasy fanga-tahana famindrana kaontera, taratasy fanaraha-maso ny kaontera, drafitra fametrahana herinaratra, tomban'ny saran'ny fanga- tahana jiro sy ny maro hafa tany aminy. (Fanararaotana – Zary lasa fitondra misoloky ny anaran’ny Jirama)
nataon' (nitranga in-3) : Izay kandidà atolony eo dia tsy maintsy ekena», hoy ny fanamarihana nataon' ny sekretera jeneralin'ny Udr-Fanovana, Naivo Raholdina, tetsy amin'ny «Relais de la haute ville», omaly maraina. (Fanararaotana – Zary lasa fitondra misoloky ny anaran’ny Jirama)
mpomba (nitranga in-1) : nipoitra ihany koa ireo mpomba an'i Jean Omer Beriziky, taorian'ilay Filan-kevitry ny minisitra niteraka resabe ary nampiseho niha- rihary indray ny tsy fitovi-an-kevitra eo amin'ny Filohan'ny tetezamita sy ny Praiminisitra amin'izay mahakasika ny fandinihana ireo volavolan-dalàna momba ny raharaham-pifidianana. (Disadisa amin-dRajoelina – Niaro an’i Beriziky Rakotovahiny sy i Voninahitsy)
Riverside (nitranga in-1) : nIVOAKA ALINA
Mpilalao (nitranga in-2) : LALAO VINTANA
nanentanana (nitranga in-1) : Ny fanatanjahantena no endrika nampitana ny hafatra mahakasika izany, ka nanentanana olona 3 000 teo ho eo. (Tapatapany)
실향민이나 (nitranga in-1) : @romanticity anisan'ny nanoratra [ko]:
nipoitra (nitranga in-1) : nipoitra ihany koa ireo mpomba an'i Jean Omer Beriziky, taorian'ilay Filan-kevitry ny minisitra niteraka resabe ary nampiseho niha- rihary indray ny tsy fitovi-an-kevitra eo amin'ny Filohan'ny tetezamita sy ny Praiminisitra amin'izay mahakasika ny fandinihana ireo volavolan-dalàna momba ny raharaham-pifidianana. (Disadisa amin-dRajoelina – Niaro an’i Beriziky Rakotovahiny sy i Voninahitsy)
tanimora (nitranga in-1) : Naiditra eny amin'ny fonjaben'An- tanimora izy ireo taorian'ny nanolorana ny Fampanoavana azy mandra-piandry ny fotoam-pitsarana. (Tapatapany)
anton' (nitranga in-1) : Ny fiahiahiana ny mety hisi-ana korontana eto Mada-gasikara no anton'izay mbola fisalasalan'ny Sadc izay raha ny nambarany. (Sombiny)
Mampiaiky (nitranga in-1) : Mampiaiky volana ny vokatr'izany – nahatonga izao tontolo izao ho liana manokana manoloana ny habibiana izay iainan'ireo ankizy manerana an'i Syria. (Krizin'ny Ankizy Ao Syria: Ahoana Ny Fomba Hanampianao)
nampiseho (nitranga in-1) : nipoitra ihany koa ireo mpomba an'i Jean Omer Beriziky, taorian'ilay Filan-kevitry ny minisitra niteraka resabe ary nampiseho niha- rihary indray ny tsy fitovi-an-kevitra eo amin'ny Filohan'ny tetezamita sy ny Praiminisitra amin'izay mahakasika ny fandinihana ireo volavolan-dalàna momba ny raharaham-pifidianana. (Disadisa amin-dRajoelina – Niaro an’i Beriziky Rakotovahiny sy i Voninahitsy)
salamana (nitranga in-1) : Mbola nanolotra fandriana miisa 288 ho an'ny CHRR Ambatondrazaka sy ireo ivon-toeram-paha- salamana ao Moramanga ihany koa Ambatovy. (Tapatapany)
Adema (nitranga in-4) : tsy hanao an-kambo ny Cnaps Sport (manga)
entona (nitranga in-1) : ramambason Andrialaza, mametaka ny fitaovana mamokatra hydrôzena hanampiana solika ampiasain'ity môtô ity
Notsindrian' (nitranga in-1) : Notsindrian'ity mpitarika ny delegasionan'ny ankolafy Zafy teo aloha ity fa «tokony samy hanaja ny toerana misy azy sy ny andraikitra sahaniny ny roa tonta». (Disadisa amin-dRajoelina – Niaro an’i Beriziky Rakotovahiny sy i Voninahitsy)
nifampizara (nitranga in-1) : Mpilalao valo no nahita ny laharana efatra tamin' ireo dimy nosarihina, ka nifampizara
Ar 641 100. (Tapatapany)
fiara (nitranga in-12) : asa na hatramin'ny rahoviana ny fanjakana vao ho tonga saina fa ny gaboraraka amin'ny fitsirihana ireo fiara afaka mivezivezy sy ny fametrahana fanamafisana ny fanaraha-maso ireo fiara mifamoivoy eny an-dalam-be no isan'ny fepetra tena hetintra fisorohana ny lozam-pifamoivoizana hamoizana ain'olona maro eto amintsika. (Fandriampahalemana – Entina amin’ny taksibe ireo voafonja hotsaraina)
Rasoava (nitranga in-1) : Rina Rasoava. (Tsisy mihaino, mody tsy mahita)
polony (nitranga in-1) : Olona am- polony isan'andro eto an-drenivohitra no tena mpanjifa tsy tapaka momba izany », hoy Rabehaja Willy Romuald, tompon'andraikitra ao amin' ny orinasa iray misahana io raharaha io. (Fanjifana – Efa iainana eto ny fiantsoana orinasa manokana hiantsena sy irakirahina)
nokarakarainay (nitranga in-1) : Ity no hetsika nandroso haingana nokarakarainay, an'arivony ireo olona misoratra anarana amin'izany isan'andro. (Krizin'ny Ankizy Ao Syria: Ahoana Ny Fomba Hanampianao)
Tongava (nitranga in-1) : org: Tongava manatevina ny hetsika Stop the Crimes Against Syria's Children (Atsaharo ny Heloka Atao amin'ireo Ankizy ao Syria)
Londra (nitranga in-1) : Dokambarotra ao amin'ny metro ao Londra Desambra 2012. (Krizin'ny Ankizy Ao Syria: Ahoana Ny Fomba Hanampianao)
kliky (nitranga in-1) : afaka mitsangatsangana manerana ny tany ianao amin'ny alalan'ny klikin'ny totozy ao amin'ny Google Maps; mijery ny amparakatsakatsaka eto an-tany, eny fa na dia ny manavatsava an'i Antartika miaraka amin'ny andian-tsary afa-mihodidina aza. (Google Mamoaka Ny Sarintanin'i Korea Avaratra Hifandrimbonana)
hahafahana (nitranga in-2) : Niezaka nanao fanentanana teny an-toerana ihany koa ny mpiasa sosialy samihafa mba hahafahana misoroka ny valanaretina. (Kitra « Grand tournoi de Tana » – Hiady Ar 2 tapitrisa ny AS Adema sy Cnaps Sport)
CHRR (nitranga in-1) : Mbola nanolotra fandriana miisa 288 ho an'ny CHRR Ambatondrazaka sy ireo ivon-toeram-paha- salamana ao Moramanga ihany koa Ambatovy. (Tapatapany)
Stéphane (nitranga in-1) : “ Efa nanao antso avo tany amin'ireo klioba hafa izahay mba hanampy anay saingy tsy nisy nanoina ka dia nanapa- kevitra izahay fa tsy handray anjara”, hoy i Stéphane Ah Waye, filohan'ny klioba Stef'Auto, solontena malagasy miaraka amin'ny Vbcd hifaninana eo amin'io fiadiana ny amboaran'i Afrika io. (Volley ball Afrika – Tsy handray anjara amin’ ny fifaninanana ny Stef’Auto)
Adebayor (nitranga in-2) : nIVOAKA ALINA
ekipan' (nitranga in-2) : Ny alatsinainy izao dia hihazo ny ivon-toerana eny Carion avy hatrany ny ekipan'ny As Adema rehetra, ka any izy ireo no hanazatra tena mandra-piainga ho any Angola. (Rugby Amboaran’ny filoha – Lalaon’ny samy goavana ny an’ny 3FB sy Tam Anosibe)
antsipirihan' (nitranga in-1) : Nanmpalahelo tokoa taloha ny kalitaon'ny sarintany Google manondro an'i Korea Avaratra, saingy efa nanome antsipirihan'ny sarintany ry zareo ankehitriny. (Google Mamoaka Ny Sarintanin'i Korea Avaratra Hifandrimbonana)
nahitana (nitranga in-2) : tsy araka izay nahiana fa tsy dia nahitana rotsak'orana nanao ahoana loatra teto an-drenivohitra vokatr'ilay rivo-doza Felleng. (Tapatapany)
hanendry (nitranga in-1) : nanome safidy mala-laka ny Filohan'ny tetezamita, Andry Rajoelina, hanendry izay kandidà hisolo azy hirotsaka amin' ny fifidianana Filoham-pirenena ny vondrona politika Udr-Fanovana. (Fanolorana kandida – Nanome fahalalahana tanteraka an-dRajoelina ny Udr-Fanovana)
hisian' (nitranga in-1) : Ny tompon'andraikitra rehetra ihany koa dia tokony hanana fanapahan-kevitra iraisana ho an'ny tombontsoam-bahoaka mba hisian'ny filaminana marina. (Krizy miverimberina – Niadian-kevitra teny Tsara-lalàna ny fototry ny olana)
Save (nitranga in-3) : Sary: Save the Children
nahatonga (nitranga in-2) : Voalaza fa noho ny rotsak'orambe niseho tany amin'ireo toerana ireo, ka nitarika ny fiakaran'ny rano no nahatonga ny tranga. (Krizin'ny Ankizy Ao Syria: Ahoana Ny Fomba Hanampianao)
Ankatso (nitranga in-1) : Hagagana ny an'ny olona rehetra teny amin'ny tribonaly Anosy, omaly, nahita ireo voafonja nentina tamin' ny fiara taksibe, zotra 128 mampitohy an'i Mahamasina sy Ankatso, raha fiara mano- kana no noheverin'ny rehetra fa fitondrana azy ireo hatramin'izay. (Fandriampahalemana – Entina amin’ny taksibe ireo voafonja hotsaraina)
Andohatapenaka (nitranga in-1) : Hiatrika ny lalao famaranana ho an'io fifaninanana io izy ireo amin'ny alahady izao, eny amin'ny kianja Makis Andohatapenaka. (Rugby Amboaran’ny filoha – Lalaon’ny samy goavana ny an’ny 3FB sy Tam Anosibe)
lavo (nitranga in-1) : Sao ho mora voalemy sy resen'ny antsoantson'ny sasany hoe io indray fa « manao tsindrio fa lavo » sy ny « tsindrihazolena » ary ny fanenjehana foana ny « madinika ». (Tsisy mihaino, mody tsy mahita)
hisafidianan' (nitranga in-1) : Araka ny fantatra dia mety tsy hanolotra anarana mba hisafidianan'ny Filoha mpanorina ny antoko Tanora malaGasy Vonona akory ity vondrona ity, fa hihanona amin'ny fano-mezana izay endrikendriky ny olona tokony harotsaka. (Fanolorana kandida – Nanome fahalalahana tanteraka an-dRajoelina ny Udr-Fanovana)
Stop (nitranga in-1) : org: Tongava manatevina ny hetsika Stop the Crimes Against Syria's Children (Atsaharo ny Heloka Atao amin'ireo Ankizy ao Syria)
Humanity (nitranga in-1) : Mampiseho ny tranga mahazo ireo ankizy Syriana ity lahatsary manaraka avy amin'ny Rise 4 Humanity ity [Tandremo: sary mampihoro-koditra, ahitana fatin'ankizy]. (Krizin'ny Ankizy Ao Syria: Ahoana Ny Fomba Hanampianao)
좋으실듯 (nitranga in-1) : @romanticity anisan'ny nanoratra [ko]:
mampanao (nitranga in-1) : Fantatra anefa fa efa misy andian-tanora mampanao fiofanana mahakasika azy io ihany koa. (Fitsitsiana angovo – Efa misy mampiofana ny fampandehanana ny fiara amin’ny rano)
nosavaina (nitranga in-1) : Mitondra karatra famantarana izy, saingy anaran'olon-kafa no misoratra ao rehefa tena nosavaina. (Fanararaotana – Zary lasa fitondra misoloky ny anaran’ny Jirama)
nahatrarana (nitranga in-1) : Teny Itaosy, ny fiandohan' ny herinandro teo no nahatrarana ny iray tamin'ireo jiolahy nanafika ny mpitandrina Lala Rasendrahasina. (Betroka – Latsa-nenina ireo voatondro ho nanafika ny pasitera Rasendrahasina)
Tournoy (nitranga in-1) : Miendrika lalao famaranana ho an'ny “Grand Tournoi de la ville d'Antananarivo” andiany voalohany, karakarain' ny ligin'Analamanga sy ny kaominina Antananarivo renivohitra ny fihaonana farany eo amin'izy ireo, etsy amin'ny kianjaben'i Mahamasina, rahampitso. (Kitra « Grand tournoi de Tana » – Hiady Ar 2 tapitrisa ny AS Adema sy Cnaps Sport)
Development (nitranga in-1) : Fiarahamonina ao amin'ny faritra izay manampy ireo ankizy Syriana:
ratsiratsy (nitranga in-1) : Mandeha tsy amin'ahiahy sy mahatoky ny vintana fotsiny, na efa hay aza fa misy olana ny hisatra, na ratsiratsy ny kodiarana, na mampahatahotra ny familiana… Adala angaha ny Ntaolo niteny hoe « Ramalina aza mifehy hazo tokana ». (Tsisy mihaino, mody tsy mahita)
Michael (nitranga in-1) : Nampitolagaga ny famerenan'i Adebayor ny fomba fandihin'i Michael Jackson. (Anjoron- »CAN »)
서비스되네요 (nitranga in-1) : @romanticity anisan'ny nanoratra [ko]:
môtô (nitranga in-1) : ramambason Andrialaza, mametaka ny fitaovana mamokatra hydrôzena hanampiana solika ampiasain'ity môtô ity
Nampitolagaga (nitranga in-1) : Nampitolagaga ny famerenan'i Adebayor ny fomba fandihin'i Michael Jackson. (Anjoron- »CAN »)
Ambohimirary (nitranga in-1) : Barphil Andriantsiferanarivo Fandaharan-dalao Sabotsy 2 febroary : 08H: BAD TEAM Alarobia # BFT Ivato (senior DAME) 09H30: BEMIRAY # DREAM TEAM (senior HOMME »A ») 11H: MADASPORT # BAD TEAM Alarobia (senior HOMME »B ») 13H00: TMB2A Ambohimirary # BCS Soamanandrariny (U20 Garcon) 14H00: BCS Soamanandrariny # JSM Ambohipo (senior HOMME »B ») Alahady 3 febroary: 08H: JBC Betongolo # AMBATOBE (senior HOMME »B ») 09H30: AMBATOBE # BAD TEAM Alarobia (senior HOMME »B ») 11H: CHALLENGER # TMB2A (U16.... (« Fety de baskety » – Hamaramparana ny fifanin- tsanana ny eny Andraisoro)
Alhames (nitranga in-1) : Mpanoratra Rami Alhames · Nandika Mamisoa
· vakio ato ny lahatsoratra nadika  [en] · hevitra (0) Zarao: facebook · twitter · reddit · StumbleUpon · delicious · Instapaper. (Krizin'ny Ankizy Ao Syria: Ahoana Ny Fomba Hanampianao)
Navoakan' (nitranga in-1) : Navoakan'ny tatitry ny Birao nasionaly misahana ny fitantanana ny loza voajanahary (Bngrc) omaly, fa olona efatra indray no tsy hita popoka, iray tany Mananara Avaratra, iray tany Midongy Atsimo, roa tany Mampikony. (Rivo-doza felleng – Olona efatra indray no tsy hita popoka)
fahasamihafan' (nitranga in-1) : Nasongadin' i @premist [ko] ny fahasamihafan'ny kalitaon'ny sarintanin'ny Korea roa tonta:
nampita (nitranga in-1) : @leftliber moa lasa be ahiahy tafahoatra [ko] momba ilay lalàna hafa, ilay Lalànan'ny Fiarovam-Pirenena izay manivana izay rehetra misy ifandraisany amin'i Korea Avaratra ka nampigadra ilay Twittere Koreana Tatsimo noho izy nampita sioka koreana tavaratra:
baovao (nitranga in-1) : «Hanana ny fanamarihany izany taom- baovao izany koa anefa ireo vohitra samihafa manerana ny Nosy ary hisy ihany koa ireo Malagasy any andafin' ny riaka no hanamarika izany», hoy Randrianjatovo Henri, filohan'ny Trano kolotoraly Malagasy. (Fomba amam-panao – Hankalazaina ny 11 sy 12 marsa ny taom-baovao malagasy)
Jordana (nitranga in-1) : Fampianarana Ambony Iraisam-pirenena (Institute of International Education): Krizin'ny Fampianarana ao Syria: Ahoana no fomba hanampianao
panao (nitranga in-1) : Toy ny isan-taona dia misy hatrany ny fanatanterahana ireo fomba amam- panao efa mahazatra, toy ny hasim-pidiovana, afo tsy maty, tso-drano, vary amin-dronono tondrahan- tantely ary ny Zara hasina. (Fomba amam-panao – Hankalazaina ny 11 sy 12 marsa ny taom-baovao malagasy)
hanairana (nitranga in-1) : Fizarana ny hetsika amin'ny alalan'ny Rise 4 humanity izay:
iraky (nitranga in-1) : mISALASALA > Tsy mbola nanambara ny mety ho fisiana fanapahan-kevitra hentitra momba ny fampodiana ny Filoha teo aloha, Marc Ravalomanana ny iraky ny vondrona Sadc, Leonardo Simao, raha nitafa fohy tamin'ny mpanao gazety, tetsy amin'ny Hotel Colbert, omaly. (Sombiny)
Colomba (nitranga in-1) : Mila tandremana ihany koa ny mety hidiran'ny rano any anaty maotera », hoy Raoeliarisaina Colomba, mpampianatra fizika. (Fitsitsiana angovo – Efa misy mampiofana ny fampandehanana ny fiara amin’ny rano)
السوريين (nitranga in-1) : Ao amin'ny Facebook: Save Syrian children
Tovonjanahary (nitranga in-1) : Efa fomba fanao hatramin'ny 1991 io”, hoy kosa Ranaivo Andria- maroahina Tovonjanahary, tale jeneralin'ny fandraharahana ny fonja eo anivon'ny minisiteran'ny Fitsarana. (Fandriampahalemana – Entina amin’ny taksibe ireo voafonja hotsaraina)
Andrialaza (nitranga in-2) : ramambason Andrialaza, mametaka ny fitaovana mamokatra hydrôzena hanampiana solika ampiasain'ity môtô ity
hanorenana (nitranga in-1) : Fiangonana iray lehibe eto an-dreni- vohitra no voalaza ho mitady haka io tany io, hanorenana trano fian- gonana. (Tapatapany)
Aubin (nitranga in-2) : Tsy vita ny maraina ny fanamboarana ireo fiara ireo, ka tsy maintsy nampiasaina hatramin'ny hariva io fiara nofaina io”, hoy ny fanazavana avy amin-dRajernerson Aubin, talen'ny fonjan'Antanimora. (Fandriampahalemana – Entina amin’ny taksibe ireo voafonja hotsaraina)
Cnaps (nitranga in-4) : tsy hanao an-kambo ny Cnaps Sport (manga)
Ravalisoa (nitranga in-1) : Tsy afaka manaisotra ireo fako ireo anefa izahay raha tsy mitsahatra ny orana », hoy Ravalisoa Henri, talen' ny famatsian-drano eo anivon'ny Jirama. (Famatsiana rano – Telo andro nisotroana orana ny mponin’Antsiranana)
Waye (nitranga in-1) : “ Efa nanao antso avo tany amin'ireo klioba hafa izahay mba hanampy anay saingy tsy nisy nanoina ka dia nanapa- kevitra izahay fa tsy handray anjara”, hoy i Stéphane Ah Waye, filohan'ny klioba Stef'Auto, solontena malagasy miaraka amin'ny Vbcd hifaninana eo amin'io fiadiana ny amboaran'i Afrika io. (Volley ball Afrika – Tsy handray anjara amin’ ny fifaninanana ny Stef’Auto)
mahazatradia (nitranga in-1) : Toy ny mahazatra,dia miara-dia hatrany amin' ny fetin'ny taom-baovao malagasy ny kabary, vako-drazana sy ny dihy samihafa. (Fomba amam-panao – Hankalazaina ny 11 sy 12 marsa ny taom-baovao malagasy)
Agosto (nitranga in-1) : Ho an'ny AS Adema dia efa fanomanana sahady ireo mpilalao hiatrika an'i Primeiro de Agosto avy any Angola, eo amin'ny fihodinana voalohany ho an'ny fiadiana ny amboaran'i Afrika izany, ny sabotsy 16 febroary 2013 ao amin'ny kianja 11 novambra ao Luanda. (Kitra « Grand tournoi de Tana » – Hiady Ar 2 tapitrisa ny AS Adema sy Cnaps Sport)
nitafa (nitranga in-1) : mISALASALA > Tsy mbola nanambara ny mety ho fisiana fanapahan-kevitra hentitra momba ny fampodiana ny Filoha teo aloha, Marc Ravalomanana ny iraky ny vondrona Sadc, Leonardo Simao, raha nitafa fohy tamin'ny mpanao gazety, tetsy amin'ny Hotel Colbert, omaly. (Sombiny)
avrily (nitranga in-1) : Hotontosaina eny amin'ny lapan'ny Fanatanjahantena ny fifaninanana amin'ny
Toamasina (nitranga in-1) : efa misy ireo orinasa manao tolotra momba ny asa irakiraka hatrany Toamasina
tratrary (nitranga in-1) : Mbola mila ampahatsiahivina ve hoy aho ilay niseho teny Ambohidahy e! Sa aleo ihany tratrarin'ny latsa aoriana ao. (Tsisy mihaino, mody tsy mahita)
ifandraisany (nitranga in-1) : @leftliber moa lasa be ahiahy tafahoatra [ko] momba ilay lalàna hafa, ilay Lalànan'ny Fiarovam-Pirenena izay manivana izay rehetra misy ifandraisany amin'i Korea Avaratra ka nampigadra ilay Twittere Koreana Tatsimo noho izy nampita sioka koreana tavaratra:
hanomezana (nitranga in-1) : Manolora ao amin'ny Save the Children mba hanomezana akanjo mafana, kiraro, ary bodofotsy ho an'ireo ankizy, fanampiana natokana ho an'ny ankizy amin'izao ririnina izao. (Krizin'ny Ankizy Ao Syria: Ahoana Ny Fomba Hanampianao)
nanafika (nitranga in-4) : namboraka tamin'ny mpanao famotorana ny zava-nitranga teny Ambatoroka, ny marainan'ny 16 janoary ireo efa-dahy voalaza fa nanafika ny mpitandrina Rasendrahasina Lala. (Fanafihana hafahafa – Talena minisitera nisy nanindrona antsy tao an-tranony)
humanity (nitranga in-1) : Fizarana ny hetsika amin'ny alalan'ny Rise 4 humanity izay:
Change (nitranga in-1) : Ao amin'ny Facebook: Save Syrian children
fahasamponana (nitranga in-1) : “Tratran'ny fahasamponana tampoka ireo fiara lehibe roa tato aminay, raha handeha hanainga ny maraina. (Fandriampahalemana – Entina amin’ny taksibe ireo voafonja hotsaraina)
Fennecs (nitranga in-1) : LEO
hiantoka (nitranga in-1) : TAN-TSOROKA> Nana-mafy ny fahavononany hiantoka ny fangaraharahan'ny fifidianana koa ny minisitera misahana ny fampifandraisana ireo andrim-panjakan'ny tete-zamita. (Sombiny)
aretina (nitranga in-1) : Mora miparitaka ny aretina noho ny fahamaroan'ny olona miara-monina”, hoy Ramamialisoa Sariaka, mpiasa sosialy avy amin'ny Birao monisipaly misahana ny fahadiovana (Bmh). (Valanaretina – Nametrahana toeram-pitsaboana eny akaikin’ ireo tra-boina)
mihoampampana (nitranga in-1) : Ny mpiasa kosa aza moa homena »tetezana » impiry impiry ka dia tena ho fatiantoka mihoampampana ve raha mahazo anjara iray andro ny mpianatra. (Fiatoana)
namoahan' (nitranga in-1) : Tamin'ny 29 Jan 2013 no namoahan'i Google ny sarintanin'i Korea Avaratra nifandrimbonana, telo herinandro monja nitsidihan'ny tale jeneralin'ny Google, Eric Schmidt, tao amin'ny firenena. (Google Mamoaka Ny Sarintanin'i Korea Avaratra Hifandrimbonana)
AT2B (nitranga in-2) : Barphil Andriantsiferanarivo Fandaharan-dalao Sabotsy 2 febroary : 08H: BAD TEAM Alarobia # BFT Ivato (senior DAME) 09H30: BEMIRAY # DREAM TEAM (senior HOMME »A ») 11H: MADASPORT # BAD TEAM Alarobia (senior HOMME »B ») 13H00: TMB2A Ambohimirary # BCS Soamanandrariny (U20 Garcon) 14H00: BCS Soamanandrariny # JSM Ambohipo (senior HOMME »B ») Alahady 3 febroary: 08H: JBC Betongolo # AMBATOBE (senior HOMME »B ») 09H30: AMBATOBE # BAD TEAM Alarobia (senior HOMME »B ») 11H: CHALLENGER # TMB2A (U16.... (« Fety de baskety » – Hamaramparana ny fifanin- tsanana ny eny Andraisoro)
Cité (nitranga in-1) : ADY TANY
Maneho ny alahelony ary manohitra ny fikasana haka ny tany fialam-boly nampi- asain'izy ireo hatramin'ny ela ny fikambanan'ny tanora eny amin'ny Cité Ambohipo. (Tapatapany)
Randrianjatovo (nitranga in-1) : «Hanana ny fanamarihany izany taom- baovao izany koa anefa ireo vohitra samihafa manerana ny Nosy ary hisy ihany koa ireo Malagasy any andafin' ny riaka no hanamarika izany», hoy Randrianjatovo Henri, filohan'ny Trano kolotoraly Malagasy. (Fomba amam-panao – Hankalazaina ny 11 sy 12 marsa ny taom-baovao malagasy)
Books4Syria (nitranga in-1) : Manomeza boky hanampiana amin'ny fianaran'ny ankizy Syriana amin'ny alalan'ny habaky ny “Just Giving website”: Books4Syria (Boky ho an'i Syria)
London (nitranga in-1) : Ao Royaume-Uni, London, fantaro fa ao amin'ny Metro an-tanàn-dehibe, misy dokambarotry ny UNICEF mba hanohanana ny ankizy ao Syria, manomeza 5 livres). (Krizin'ny Ankizy Ao Syria: Ahoana Ny Fomba Hanampianao)
Rabearivelo (nitranga in-2) : tany amin'ny taona 30 no namoahana ireo bokin'i JJ Rabearivelo ireo
hamaha (nitranga in-1) : Tokony hiezaka hamaha haingana ny olana ny minisitera tompon'andrai- kitra, satria hafa mihitsy ny teknika ahafahana miaro ireo voafonja amin'ireo fiara natokana ho amin'izany. (Fandriampahalemana – Entina amin’ny taksibe ireo voafonja hotsaraina)
Antoinette (nitranga in-1) : Isan'ireo tsy afaka hilalao i Elisa Mampionona Raharimalala sy Sylvie Seta Antoinette ary Sonia Razanamalala na i Lydia noho ny antony ara-pahasalamana. (Volley ball Afrika – Tsy handray anjara amin’ ny fifaninanana ny Stef’Auto)
nahasarika (nitranga in-1) : nahasarika ny mason'ny olona maro ny nahita ireo voafonja tao anaty taksibe
Eugène (nitranga in-1) : Tetsy an-kilan'izay dia naneho ny tsy fankasitrahany ny fanaovana antsojay amin'ny Lehiben'ny governemanta ihany koa ny filohan'ny vondrona politika «Les As»», voninahitsy Jean Eugène. (Disadisa amin-dRajoelina – Niaro an’i Beriziky Rakotovahiny sy i Voninahitsy)
Marc (nitranga in-1) : mISALASALA > Tsy mbola nanambara ny mety ho fisiana fanapahan-kevitra hentitra momba ny fampodiana ny Filoha teo aloha, Marc Ravalomanana ny iraky ny vondrona Sadc, Leonardo Simao, raha nitafa fohy tamin'ny mpanao gazety, tetsy amin'ny Hotel Colbert, omaly. (Sombiny)
hamita (nitranga in-1) : «Mahatohina ny mahita ireny zava-mitranga ireny satria mbola hamafisiko ihany fa tsy maintsy miara- miasa hamita hatramin'ny farany ny tetezamita izy mirahalahy ireo. (Disadisa amin-dRajoelina – Niaro an’i Beriziky Rakotovahiny sy i Voninahitsy)
twitter (nitranga in-2) : Mpanoratra Rami Alhames · Nandika Mamisoa
Mikambanba (nitranga in-1) : Araka ny filazan'ny Sampan-draharahan'ny Firenena Mikambanba misahana ny Mpitsoa-ponenana (UNHCR), mpitsoa-ponenana Syriana 650. (Krizin'ny Ankizy Ao Syria: Ahoana Ny Fomba Hanampianao)
anisan' (nitranga in-2) : Toerana iseraseran'ny tanora sy anovozany fahalalana, manan-danja ho an'ny fampivelarana azy ireo ny tranon'ny tanora, anisan'ireo tetikasan' ny minisiteran'ny Tanora sy ny ala voly. (Google Mamoaka Ny Sarintanin'i Korea Avaratra Hifandrimbonana)
fandanjalanjana (nitranga in-1) : Ilaina noho izany ny fandanjalanjana », hoy ity mpahay lalàna ity. (Krizy miverimberina – Niadian-kevitra teny Tsara-lalàna ny fototry ny olana)
lalàna (nitranga in-7) : Ampiharo ny lalàna fa ain'olona no lalaovina. (Google Mamoaka Ny Sarintanin'i Korea Avaratra Hifandrimbonana)
harotsaka (nitranga in-1) : Araka ny fantatra dia mety tsy hanolotra anarana mba hisafidianan'ny Filoha mpanorina ny antoko Tanora malaGasy Vonona akory ity vondrona ity, fa hihanona amin'ny fano-mezana izay endrikendriky ny olona tokony harotsaka. (Fanolorana kandida – Nanome fahalalahana tanteraka an-dRajoelina ny Udr-Fanovana)
hihanona (nitranga in-1) : Araka ny fantatra dia mety tsy hanolotra anarana mba hisafidianan'ny Filoha mpanorina ny antoko Tanora malaGasy Vonona akory ity vondrona ity, fa hihanona amin'ny fano-mezana izay endrikendriky ny olona tokony harotsaka. (Fanolorana kandida – Nanome fahalalahana tanteraka an-dRajoelina ny Udr-Fanovana)
hidiran' (nitranga in-1) : Mila tandremana ihany koa ny mety hidiran'ny rano any anaty maotera », hoy Raoeliarisaina Colomba, mpampianatra fizika. (Fitsitsiana angovo – Efa misy mampiofana ny fampandehanana ny fiara amin’ny rano)
baravy (nitranga in-1) : Tsentsin'ireo fako ireo ny baravy misakana ireo fako eo amin'ny vava fantsona idiran'ny rano, ka mahatonga ireo faritra maro tsy voavatsy rano. (Famatsiana rano – Telo andro nisotroana orana ny mponin’Antsiranana)
nomarihy (nitranga in-2) : «Afaka 10 na 15 andro eo ho eo fara fahafantarany dia hanolotra izay anarana kandidà izay amintsika ny Filohan'ny tetezamita», araka ny nomarihin'ny Filoha mpitarika ny Udr-Fanovana, Reboza Julien teny an-toerana, nandritra ny fihaonany tamin'ireo mpanao politika miara-dia aminy ao anatin'ity vondrona politika akaiky ny Filohan'ny tetezamita ity. (Literatiora – Nivoaka ny boky roa an- dRabearivelo nohavaozina)
hanohanana (nitranga in-1) : Ao Royaume-Uni, London, fantaro fa ao amin'ny Metro an-tanàn-dehibe, misy dokambarotry ny UNICEF mba hanohanana ny ankizy ao Syria, manomeza 5 livres). (Krizin'ny Ankizy Ao Syria: Ahoana Ny Fomba Hanampianao)
Hitarina (nitranga in-1) : tRANON'NY TANORA
nateraky (nitranga in-1) : Raha ny fanazavan'ireo mponina avy any an-toerana dia ny ranon'orana nateraky ny fandalovan'ilay rivo-doza Felleng no tatazana sy sotroin'izy ireo ankehitriny. (Famatsiana rano – Telo andro nisotroana orana ny mponin’Antsiranana)
nametrahana (nitranga in-1) : nametrahana toeram-pitsaboana ireo tra-boina
natokana (nitranga in-3) : Tokony hiezaka hamaha haingana ny olana ny minisitera tompon'andrai- kitra, satria hafa mihitsy ny teknika ahafahana miaro ireo voafonja amin'ireo fiara natokana ho amin'izany. (Krizin'ny Ankizy Ao Syria: Ahoana Ny Fomba Hanampianao)
Facebook (nitranga in-1) : Sary: Global Research
distrikan' (nitranga in-1) : Ankoatra ireo olona tsy hita popoka ireo izany dia miisa dimy hatramin'izao ny olona namoy ny ainy, 946 ny tra-boina, 184 ny olona tsy manan-kialofana, 241 ny trano tondraky ny rano, efatra ny trano nisy fahasimbana, dimy ny trano tena potika, tetezana iray sy lalana any amin'ny kaominina Tanambao Mahatsara, distrikan'i Vatomandry no tapaka. (Rivo-doza felleng – Olona efatra indray no tsy hita popoka)
mpilalao (nitranga in-6) : Ho an'ny AS Adema dia efa fanomanana sahady ireo mpilalao hiatrika an'i Primeiro de Agosto avy any Angola, eo amin'ny fihodinana voalohany ho an'ny fiadiana ny amboaran'i Afrika izany, ny sabotsy 16 febroary 2013 ao amin'ny kianja 11 novambra ao Luanda. (Tapatapany)
minisiteran' (nitranga in-6) : ny alin'ny alakamisy teo no nisy nanafika ny tale misahana ny raharaha mahakasika ny lalàna eo anivon'ny minisiteran'ny Mponina, teny Androndra. (Rugby Amboaran’ny filoha – Lalaon’ny samy goavana ny an’ny 3FB sy Tam Anosibe)
구글지도에 (nitranga in-1) : @leejik manontany tena [ko] manontany ny dikan'izany fiovana izany:
filàn' (nitranga in-1) : Ity lahatsary manaraka ity, Ao anatin'ny Hatsiaka: miaritra ny ririnina ireo fianakaviana mpitsoa-ponenana Syriana, lahatsary navoakan'ny savethechildrenuk mba hampisehoana ny filàn'ny ankizy sy ny fanangonam-bola ho an'ireo ankizy mpitsoa-ponenana:
asay (nitranga in-1) : ADY TANY
fonjaben' (nitranga in-1) : Naiditra eny amin'ny fonjaben'An- tanimora izy ireo taorian'ny nanolorana ny Fampanoavana azy mandra-piandry ny fotoam-pitsarana. (Tapatapany)
nanolorana (nitranga in-1) : Naiditra eny amin'ny fonjaben'An- tanimora izy ireo taorian'ny nanolorana ny Fampanoavana azy mandra-piandry ny fotoam-pitsarana. (Tapatapany)
Harotsilavo (nitranga in-1) : nitondra hevitra maro ho an'izay ho mpitondra rahampitso i Harotsilavo Rakotoson, mpahay lalàna nandritra ny famelabelaran-kevitra nataony teny amin'ny sekolim-pirenena manofana ho mpitsara sy mpiraki-draharaha eny Tsaralalàna, omaly. (Krizy miverimberina – Niadian-kevitra teny Tsara-lalàna ny fototry ny olana)
nanilika (nitranga in-1) : Teo amin'ny manasa-dalana dia nanilika ny US Ankadifotsy tamin' ny alalan'ny isa 18 no ho 15 ny ekipan'ny minisiteran' ny Fahasalamam-bahoaka. (Rugby Amboaran’ny filoha – Lalaon’ny samy goavana ny an’ny 3FB sy Tam Anosibe)
iainan' (nitranga in-1) : Mampiaiky volana ny vokatr'izany – nahatonga izao tontolo izao ho liana manokana manoloana ny habibiana izay iainan'ireo ankizy manerana an'i Syria. (Krizin'ny Ankizy Ao Syria: Ahoana Ny Fomba Hanampianao)
Leonardo (nitranga in-1) : mISALASALA > Tsy mbola nanambara ny mety ho fisiana fanapahan-kevitra hentitra momba ny fampodiana ny Filoha teo aloha, Marc Ravalomanana ny iraky ny vondrona Sadc, Leonardo Simao, raha nitafa fohy tamin'ny mpanao gazety, tetsy amin'ny Hotel Colbert, omaly. (Sombiny)
tonolon' (nitranga in-1) : ireo ankizy, tsy afa-mitombo ao anatin'ny tonolon'ny fifampitokisana, dia tsy maintsy miatrika habibiana dieny mbola ao anatin'ny fahazazana tanteraka, matetika manamasaka ao anatiny ao fa fomba iray tahaka ny hafa hamahana ireo disadisa ny herisetra, ka sarotra ho azy ireo ny handefa hafatra ho amin'ny fandriampahalemana sy ny fiarovana erantany ho an'ny taranaka hoavy
Nandika (nitranga in-2) : Mpanoratra Rami Alhames · Nandika Mamisoa
اللاجئين (nitranga in-1) : Ao amin'ny Facebook: Save Syrian children
Itaosy (nitranga in-2) : Teny Itaosy, ny fiandohan' ny herinandro teo no nahatrarana ny iray tamin'ireo jiolahy nanafika ny mpitandrina Lala Rasendrahasina. (Betroka – Latsa-nenina ireo voatondro ho nanafika ny pasitera Rasendrahasina)
Ambatoroka (nitranga in-2) : namboraka tamin'ny mpanao famotorana ny zava-nitranga teny Ambatoroka, ny marainan'ny 16 janoary ireo efa-dahy voalaza fa nanafika ny mpitandrina Rasendrahasina Lala. (Betroka – Latsa-nenina ireo voatondro ho nanafika ny pasitera Rasendrahasina)
Ambatovy (nitranga in-1) : Mbola nanolotra fandriana miisa 288 ho an'ny CHRR Ambatondrazaka sy ireo ivon-toeram-paha- salamana ao Moramanga ihany koa Ambatovy. (Tapatapany)
nilaza (nitranga in-4) : Nanom-boka teo ny disadisa teo aminay samy mpanafika satria samy nilaza ho tsy nisy nahita an'io vola io », hoy izy ireo tamin'ny mpanao famotorana. (Ankatso – Misy adala mampatahotra mirenireny)
ekipa (nitranga in-7) : Mandritra io fifaninanana io rahateo no hahafahan-dry Titi Rasoanaivo, mpanazatra ny Cnaps Sport, mifantina tsara ireo mpilalao 25 takian'ny federasiona ho an'ireo ekipa milalao eo amin'ny diviziona voalohany, mandrindra ny taom-pilalaovana. (« Fety de baskety » – Hamaramparana ny fifanin- tsanana ny eny Andraisoro)
kalitaon' (nitranga in-2) : Nanmpalahelo tokoa taloha ny kalitaon'ny sarintany Google manondro an'i Korea Avaratra, saingy efa nanome antsipirihan'ny sarintany ry zareo ankehitriny. (Google Mamoaka Ny Sarintanin'i Korea Avaratra Hifandrimbonana)
mampahatahotra (nitranga in-1) : Mandeha tsy amin'ahiahy sy mahatoky ny vintana fotsiny, na efa hay aza fa misy olana ny hisatra, na ratsiratsy ny kodiarana, na mampahatahotra ny familiana… Adala angaha ny Ntaolo niteny hoe « Ramalina aza mifehy hazo tokana ». (Tsisy mihaino, mody tsy mahita)
rues (nitranga in-2) : Boky roa nosoratan' i Jean Joseph Rabearivelo no nohavaozin'ny Bank Of Afrika ny fanontana azy, ka natolotr'izy ireo ny tranombokim-pirenena etsy Anosy omaly : «Traduit de la nuit na Nadika tamin'ny alina» sy ny «Tananarive ses rues, ses quartiers». (Literatiora – Nivoaka ny boky roa an- dRabearivelo nohavaozina)
hampisehoana (nitranga in-1) : Ity lahatsary manaraka ity, Ao anatin'ny Hatsiaka: miaritra ny ririnina ireo fianakaviana mpitsoa-ponenana Syriana, lahatsary navoakan'ny savethechildrenuk mba hampisehoana ny filàn'ny ankizy sy ny fanangonam-bola ho an'ireo ankizy mpitsoa-ponenana:
nanazava (nitranga in-1) : Nahatsiaro reraka aho nanazava tamin'izy ireo, izay tsy nino mihitsy ny fihintsananay», hoy izy. (Anjoron- »CAN »)
Dokambarotra (nitranga in-1) : Dokambarotra ao amin'ny metro ao Londra Desambra 2012. (Krizin'ny Ankizy Ao Syria: Ahoana Ny Fomba Hanampianao)
nosarihina (nitranga in-1) : Mpilalao valo no nahita ny laharana efatra tamin' ireo dimy nosarihina, ka nifampizara
Hotel (nitranga in-1) : mISALASALA > Tsy mbola nanambara ny mety ho fisiana fanapahan-kevitra hentitra momba ny fampodiana ny Filoha teo aloha, Marc Ravalomanana ny iraky ny vondrona Sadc, Leonardo Simao, raha nitafa fohy tamin'ny mpanao gazety, tetsy amin'ny Hotel Colbert, omaly. (Sombiny)
Alain (nitranga in-1) : Raha ny nambaran'i Alain Soumoudronga, sekretera jeneralin'ny vondron'ireo mpandraha- raha ara-tsolika (Gpm) dia amin'ny 07 febroary ho avy izao no vinavinaina hotanterahina io fivoriana voalohany io. (Fandraharahana – Antomotra ny fivoriana momba ny fihetsehan’ny vidin-tsolika)
manamasaka (nitranga in-1) : ireo ankizy, tsy afa-mitombo ao anatin'ny tonolon'ny fifampitokisana, dia tsy maintsy miatrika habibiana dieny mbola ao anatin'ny fahazazana tanteraka, matetika manamasaka ao anatiny ao fa fomba iray tahaka ny hafa hamahana ireo disadisa ny herisetra, ka sarotra ho azy ireo ny handefa hafatra ho amin'ny fandriampahalemana sy ny fiarovana erantany ho an'ny taranaka hoavy
Lydia (nitranga in-1) : Isan'ireo tsy afaka hilalao i Elisa Mampionona Raharimalala sy Sylvie Seta Antoinette ary Sonia Razanamalala na i Lydia noho ny antony ara-pahasalamana. (Volley ball Afrika – Tsy handray anjara amin’ ny fifaninanana ny Stef’Auto)
sotroy (nitranga in-1) : Raha ny fanazavan'ireo mponina avy any an-toerana dia ny ranon'orana nateraky ny fandalovan'ilay rivo-doza Felleng no tatazana sy sotroin'izy ireo ankehitriny. (Famatsiana rano – Telo andro nisotroana orana ny mponin’Antsiranana)
مؤسسة (nitranga in-1) : Fiarahamonina ao amin'ny faritra izay manampy ireo ankizy Syriana:
신기하네요 (nitranga in-1) : @9it nanampy [ko]:
nanambara (nitranga in-2) : mISALASALA > Tsy mbola nanambara ny mety ho fisiana fanapahan-kevitra hentitra momba ny fampodiana ny Filoha teo aloha, Marc Ravalomanana ny iraky ny vondrona Sadc, Leonardo Simao, raha nitafa fohy tamin'ny mpanao gazety, tetsy amin'ny Hotel Colbert, omaly. (Fandraharahana – Antomotra ny fivoriana momba ny fihetsehan’ny vidin-tsolika)
alain (nitranga in-1) : alain Soumoudronga, sekretera jeneralin'ny Gpm
faranny (nitranga in-1) : Iretsy ambany iretsy ny fandaharam-potoana ho aminity faranny herinandro ity. (« Fety de baskety » – Hamaramparana ny fifanin- tsanana ny eny Andraisoro)
hanampiana (nitranga in-3) : ramambason Andrialaza, mametaka ny fitaovana mamokatra hydrôzena hanampiana solika ampiasain'ity môtô ity
Ny voka-pikarohana nataon-dRakotomamonjy Salohy Fenosoa, mpianatra eo anivon'ny Lycée teknika etsy Alarobia, no nampahafantarana ny besinimaro ny 16 janoary teo, fa azo atao ny mampihena ny fandaniana solika amin'ny alalan'ny fampiasana ny hydrôzena, entona azo avy amin'ny fivakian-drianaratra na « électrolyse ». (Krizin'ny Ankizy Ao Syria: Ahoana Ny Fomba Hanampianao)
hotanterahina (nitranga in-1) : Raha ny nambaran'i Alain Soumoudronga, sekretera jeneralin'ny vondron'ireo mpandraha- raha ara-tsolika (Gpm) dia amin'ny 07 febroary ho avy izao no vinavinaina hotanterahina io fivoriana voalohany io. (Fandraharahana – Antomotra ny fivoriana momba ny fihetsehan’ny vidin-tsolika)
trabiby (nitranga in-1) : Ankoatra ny eny Ambohi- trabiby, izay niandohan' ny taom-baovao malagasy tamin'ny andron-dRalambo, dia handray ireo hetsika rehetra amin'ity taona ity ihany koa ny kianjan' Andohalo. (Fomba amam-panao – Hankalazaina ny 11 sy 12 marsa ny taom-baovao malagasy)
Jean (nitranga in-4) : nipoitra ihany koa ireo mpomba an'i Jean Omer Beriziky, taorian'ilay Filan-kevitry ny minisitra niteraka resabe ary nampiseho niha- rihary indray ny tsy fitovi-an-kevitra eo amin'ny Filohan'ny tetezamita sy ny Praiminisitra amin'izay mahakasika ny fandinihana ireo volavolan-dalàna momba ny raharaham-pifidianana. (Literatiora – Nivoaka ny boky roa an- dRabearivelo nohavaozina)
resabe (nitranga in-1) : nipoitra ihany koa ireo mpomba an'i Jean Omer Beriziky, taorian'ilay Filan-kevitry ny minisitra niteraka resabe ary nampiseho niha- rihary indray ny tsy fitovi-an-kevitra eo amin'ny Filohan'ny tetezamita sy ny Praiminisitra amin'izay mahakasika ny fandinihana ireo volavolan-dalàna momba ny raharaham-pifidianana. (Disadisa amin-dRajoelina – Niaro an’i Beriziky Rakotovahiny sy i Voninahitsy)
nisokafana (nitranga in-1) : « Telo taona izao no nisokafana. (Fanjifana – Efa iainana eto ny fiantsoana orinasa manokana hiantsena sy irakirahina)
Soumoudronga (nitranga in-2) : alain Soumoudronga, sekretera jeneralin'ny Gpm
mpanolotsainan' (nitranga in-1) : Notsipihin'i Emmanuel Rakotovahiny, mpanolotsainan'ny Praimi- nisitra fa «tsy tokony hisy ny fanaovana tery vay manta amin'ny fandinihana na fandaniana io volavolan-dalàna io ary tsy anjaran' ny Filohan'ny tetezamita irery no mandidy sy mana- paka ny momba izany». (Disadisa amin-dRajoelina – Niaro an’i Beriziky Rakotovahiny sy i Voninahitsy)
Twitter (nitranga in-1) : Sary: UNICEF España on Twitter. (Krizin'ny Ankizy Ao Syria: Ahoana Ny Fomba Hanampianao)
ahiana (nitranga in-2) : Isan'ny ahiana amin'izany ny etsy amin'ny fokontany Ankorondrano Andranomahery sy teny Anosizato. (Ankatso – Misy adala mampatahotra mirenireny)
nohavaozy (nitranga in-1) : Boky roa nosoratan' i Jean Joseph Rabearivelo no nohavaozin'ny Bank Of Afrika ny fanontana azy, ka natolotr'izy ireo ny tranombokim-pirenena etsy Anosy omaly : «Traduit de la nuit na Nadika tamin'ny alina» sy ny «Tananarive ses rues, ses quartiers». (Literatiora – Nivoaka ny boky roa an- dRabearivelo nohavaozina)
Twittere (nitranga in-1) : @leftliber moa lasa be ahiahy tafahoatra [ko] momba ilay lalàna hafa, ilay Lalànan'ny Fiarovam-Pirenena izay manivana izay rehetra misy ifandraisany amin'i Korea Avaratra ka nampigadra ilay Twittere Koreana Tatsimo noho izy nampita sioka koreana tavaratra:
Andriantsiferanarivo (nitranga in-1) : Barphil Andriantsiferanarivo Fandaharan-dalao Sabotsy 2 febroary : 08H: BAD TEAM Alarobia # BFT Ivato (senior DAME) 09H30: BEMIRAY # DREAM TEAM (senior HOMME »A ») 11H: MADASPORT # BAD TEAM Alarobia (senior HOMME »B ») 13H00: TMB2A Ambohimirary # BCS Soamanandrariny (U20 Garcon) 14H00: BCS Soamanandrariny # JSM Ambohipo (senior HOMME »B ») Alahady 3 febroary: 08H: JBC Betongolo # AMBATOBE (senior HOMME »B ») 09H30: AMBATOBE # BAD TEAM Alarobia (senior HOMME »B ») 11H: CHALLENGER # TMB2A (U16.... (« Fety de baskety » – Hamaramparana ny fifanin- tsanana ny eny Andraisoro)
Ramalina (nitranga in-1) : Mandeha tsy amin'ahiahy sy mahatoky ny vintana fotsiny, na efa hay aza fa misy olana ny hisatra, na ratsiratsy ny kodiarana, na mampahatahotra ny familiana… Adala angaha ny Ntaolo niteny hoe « Ramalina aza mifehy hazo tokana ». (Tsisy mihaino, mody tsy mahita)
Nanoratra (nitranga in-1) : Nanoratra ny fisantarana andraikitra tao amin'ny bilaogy ofisialin'ny Google Maps i Jayanth Mysore, mpitarika ny tetikasa Taon-tsarintany Google. (Google Mamoaka Ny Sarintanin'i Korea Avaratra Hifandrimbonana)
noentina (nitranga in-1) : Efa noentina teny amin'ny Fitsa-rana izy ireo omaly, saingy mbola haverina hohenoina eny indray anio. (Betroka – Latsa-nenina ireo voatondro ho nanafika ny pasitera Rasendrahasina)
350km (nitranga in-1) : Tany amin'ny 350km atsinanan'i Manakara no nisy ny foibeny, omaly hariva. (Rivo-doza felleng – Olona efatra indray no tsy hita popoka)
hamoizana (nitranga in-1) : asa na hatramin'ny rahoviana ny fanjakana vao ho tonga saina fa ny gaboraraka amin'ny fitsirihana ireo fiara afaka mivezivezy sy ny fametrahana fanamafisana ny fanaraha-maso ireo fiara mifamoivoy eny an-dalam-be no isan'ny fepetra tena hetintra fisorohana ny lozam-pifamoivoizana hamoizana ain'olona maro eto amintsika. (Tsisy mihaino, mody tsy mahita)
Production (nitranga in-1) : Ny Vohitsera Production kosa no niantsoroka ny famokarana
International (nitranga in-2) : Fiarahamonina ao amin'ny faritra izay manampy ireo ankizy Syriana:
Rabehaja (nitranga in-2) : Olona am- polony isan'andro eto an-drenivohitra no tena mpanjifa tsy tapaka momba izany », hoy Rabehaja Willy Romuald, tompon'andraikitra ao amin' ny orinasa iray misahana io raharaha io. (Fanjifana – Efa iainana eto ny fiantsoana orinasa manokana hiantsena sy irakirahina)
mifehy (nitranga in-1) : Mandeha tsy amin'ahiahy sy mahatoky ny vintana fotsiny, na efa hay aza fa misy olana ny hisatra, na ratsiratsy ny kodiarana, na mampahatahotra ny familiana… Adala angaha ny Ntaolo niteny hoe « Ramalina aza mifehy hazo tokana ». (Tsisy mihaino, mody tsy mahita)
Monica (nitranga in-1) : Monica Rasoloarison. (Fanjifana – Efa iainana eto ny fiantsoana orinasa manokana hiantsena sy irakirahina)
Mora (nitranga in-1) : Mora miparitaka ny aretina noho ny fahamaroan'ny olona miara-monina”, hoy Ramamialisoa Sariaka, mpiasa sosialy avy amin'ny Birao monisipaly misahana ny fahadiovana (Bmh). (Valanaretina – Nametrahana toeram-pitsaboana eny akaikin’ ireo tra-boina)
Ramamialisoa (nitranga in-1) : Mora miparitaka ny aretina noho ny fahamaroan'ny olona miara-monina”, hoy Ramamialisoa Sariaka, mpiasa sosialy avy amin'ny Birao monisipaly misahana ny fahadiovana (Bmh). (Valanaretina – Nametrahana toeram-pitsaboana eny akaikin’ ireo tra-boina)
Besokatra (nitranga in-1) : « Rehefa avy be ny orana dia entin'ny riaka ireo poti- kazo tapaka manamorona ny sahan-driaka ao Besokatra, mamatsy rano an'Antsiranana. (Famatsiana rano – Telo andro nisotroana orana ny mponin’Antsiranana)
15kg (nitranga in-1) : « Ar 1000 ny amin'ny halaviran-dalana latsaky ny 6km ho an'ny entana tsy mihoatra ny 15kg. (Fanjifana – Efa iainana eto ny fiantsoana orinasa manokana hiantsena sy irakirahina)
Felleng (nitranga in-4) : tsy araka izay nahiana fa tsy dia nahitana rotsak'orana nanao ahoana loatra teto an-drenivohitra vokatr'ilay rivo-doza Felleng. (Famatsiana rano – Telo andro nisotroana orana ny mponin’Antsiranana)
Tsentsy (nitranga in-1) : Tsentsin'ireo fako ireo ny baravy misakana ireo fako eo amin'ny vava fantsona idiran'ny rano, ka mahatonga ireo faritra maro tsy voavatsy rano. (Famatsiana rano – Telo andro nisotroana orana ny mponin’Antsiranana)
Zaatary (nitranga in-1) : Manomeza boky hanampiana amin'ny fianaran'ny ankizy Syriana amin'ny alalan'ny habaky ny “Just Giving website”: Books4Syria (Boky ho an'i Syria)
diviziona (nitranga in-1) : Mandritra io fifaninanana io rahateo no hahafahan-dry Titi Rasoanaivo, mpanazatra ny Cnaps Sport, mifantina tsara ireo mpilalao 25 takian'ny federasiona ho an'ireo ekipa milalao eo amin'ny diviziona voalohany, mandrindra ny taom-pilalaovana. (Kitra « Grand tournoi de Tana » – Hiady Ar 2 tapitrisa ny AS Adema sy Cnaps Sport)
Soamanandrariny (nitranga in-2) : Barphil Andriantsiferanarivo Fandaharan-dalao Sabotsy 2 febroary : 08H: BAD TEAM Alarobia # BFT Ivato (senior DAME) 09H30: BEMIRAY # DREAM TEAM (senior HOMME »A ») 11H: MADASPORT # BAD TEAM Alarobia (senior HOMME »B ») 13H00: TMB2A Ambohimirary # BCS Soamanandrariny (U20 Garcon) 14H00: BCS Soamanandrariny # JSM Ambohipo (senior HOMME »B ») Alahady 3 febroary: 08H: JBC Betongolo # AMBATOBE (senior HOMME »B ») 09H30: AMBATOBE # BAD TEAM Alarobia (senior HOMME »B ») 11H: CHALLENGER # TMB2A (U16.... (« Fety de baskety » – Hamaramparana ny fifanin- tsanana ny eny Andraisoro)
handraisana (nitranga in-1) : “Tsy fahampian'ny fitaovana no tsy maintsy handraisana izany fepetra izany. (Fandriampahalemana – Entina amin’ny taksibe ireo voafonja hotsaraina)
Pikantsary (nitranga in-1) : Pikantsary. (Google Mamoaka Ny Sarintanin'i Korea Avaratra Hifandrimbonana)
nogadraina (nitranga in-1) : An'arivony mahery ireo naratra, nogadraina sy tsy tafahaona intsony tamin'ny fianakaviany, na tsy nahazo fitsaboana sy fanampiana maha-olona. (Krizin'ny Ankizy Ao Syria: Ahoana Ny Fomba Hanampianao)
Karàna (nitranga in-1) : Andro vitsy lasa izay no nisy fanafihana tranona Karàna iray teny Mana-kambahiny. (Fanararaotana – Zary lasa fitondra misoloky ny anaran’ny Jirama)
teto (nitranga in-1) : tsy araka izay nahiana fa tsy dia nahitana rotsak'orana nanao ahoana loatra teto an-drenivohitra vokatr'ilay rivo-doza Felleng. (Fiatoana)
nampigadra (nitranga in-1) : @leftliber moa lasa be ahiahy tafahoatra [ko] momba ilay lalàna hafa, ilay Lalànan'ny Fiarovam-Pirenena izay manivana izay rehetra misy ifandraisany amin'i Korea Avaratra ka nampigadra ilay Twittere Koreana Tatsimo noho izy nampita sioka koreana tavaratra:
Pyongyang (nitranga in-1) : Nefa dia hita izany ankehitriny ao Pyongyang ao Korea Avaratra. (Google Mamoaka Ny Sarintanin'i Korea Avaratra Hifandrimbonana)
efitrano (nitranga in-1) : “Eny amin'ny efitrano fianarana lehibe iray somary manamorona hazo no ahitanay io lehilahy io matetika. (Ankatso – Misy adala mampatahotra mirenireny)
للتنمية (nitranga in-1) : Fiarahamonina ao amin'ny faritra izay manampy ireo ankizy Syriana:
Moramanga (nitranga in-2) : hARENA AN-KIBON' NY TANY
hitantana (nitranga in-1) : LEO
Anosy (nitranga in-3) : Hagagana ny an'ny olona rehetra teny amin'ny tribonaly Anosy, omaly, nahita ireo voafonja nentina tamin' ny fiara taksibe, zotra 128 mampitohy an'i Mahamasina sy Ankatso, raha fiara mano- kana no noheverin'ny rehetra fa fitondrana azy ireo hatramin'izay. (Literatiora – Nivoaka ny boky roa an- dRabearivelo nohavaozina)
hampiantrano (nitranga in-1) : Izay no tsy ahafahan'izy ireo miatrika io fifaninanana io na dia isika aza no hampiantrano azy ity eny amin'ny lapan'ny Fanatanjahantena. (Volley ball Afrika – Tsy handray anjara amin’ ny fifaninanana ny Stef’Auto)
navoakan' (nitranga in-2) : 355 eo no namoy ny ainy (hatramin'ny 15/1/2013) ao anatin'izao ady ao Syria izao, araka ny tatitra farany navoakan'ny Angon'ny Martioran'ny Revolisiona Syriana. (Krizin'ny Ankizy Ao Syria: Ahoana Ny Fomba Hanampianao)
hakiviana (nitranga in-1) : LEO
Arivonimamo (nitranga in-1) : Nilaza izy fa dimy volana izay no nanaovany ity asa fisolokiana ity ary teny Alakamisy Fenoarivo sy Ambatomaro no nanaovany izany teo aloha », hoy ny loharanom-baovao avy amin'ny zandary any Arivonimamo, izay nanao ny famotorana. (Fanararaotana – Zary lasa fitondra misoloky ny anaran’ny Jirama)
maso (nitranga in-1) : “Tratran'ny aretim-pivalanana sy kohaka ary areti- maso ny ankabeazan'ireo ankizy madinika sy ireo efa zokiolona. (Valanaretina – Nametrahana toeram-pitsaboana eny akaikin’ ireo tra-boina)
hankalazaina (nitranga in-1) : Homarihina sy hankalazaina ny 10 ka hatramin'ny 12 marsa 2013 ny taom-baovao malagasy. (Fomba amam-panao – Hankalazaina ny 11 sy 12 marsa ny taom-baovao malagasy)
2002 (nitranga in-1) : Ity no vokatra kely indrindra indray, taorian' ny Can 2002 notontosaina tany Mali (isa 36). (Anjoron- »CAN »)
평양에서는 (nitranga in-1) : Nasongadin' i @premist [ko] ny fahasamihafan'ny kalitaon'ny sarintanin'ny Korea roa tonta:
Carion (nitranga in-1) : Ny alatsinainy izao dia hihazo ny ivon-toerana eny Carion avy hatrany ny ekipan'ny As Adema rehetra, ka any izy ireo no hanazatra tena mandra-piainga ho any Angola. (Kitra « Grand tournoi de Tana » – Hiady Ar 2 tapitrisa ny AS Adema sy Cnaps Sport)
안해봤는데 (nitranga in-1) : @9it nanampy [ko]:
handraisan' (nitranga in-2) : Ny tsy fahampiana isa eo amin'ireo mpilalao handrafitra izany ekipa izany no antony voalohany tsy handraisan'ny Stef'Auto anjara. (Krizin'ny Ankizy Ao Syria: Ahoana Ny Fomba Hanampianao)
delegasionan' (nitranga in-1) : Notsindrian'ity mpitarika ny delegasionan'ny ankolafy Zafy teo aloha ity fa «tokony samy hanaja ny toerana misy azy sy ny andraikitra sahaniny ny roa tonta». (Disadisa amin-dRajoelina – Niaro an’i Beriziky Rakotovahiny sy i Voninahitsy)
ividianana (nitranga in-1) : Iantsorohany avokoa rehefa asa rehetra mahakasika ny fiantsenana, toy fividianana ny entana ilaina andavanandro, fanaka…
Hita tao amin'ny "https://mg.wiktionary.org/w/index.php?title=Mpikambana:Bot-Jagwar/tenin%27ny_gazety/2_Febroary_2013&oldid=9629277"
Voaova farany tamin'ny 2 Febroary 2013 amin'ny 22:01 ity pejy ity.